"အခက်အခဲတွေ ရှိ၇င် ဒီကိုလာပါ" [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > "အခက်အခဲတွေ ရှိ၇င် ဒီကိုလာပါ"
View Full Version : "အခက်အခဲတွေ ရှိ၇င် ဒီကိုလာပါ"
Window Vista ( Home Premium ) version ဖြစ်ပါတယ်။ AutoCAD2008 CD ချပ်က ..ရန်ကုန်ကဝယ်ပေးခဲ့တာ ၂ချပ်ပါတယ်။ အင်စတောတဲ့အခါ ကျွန်တော့်စက်က လက်မခံဘူးဖြစ်နေတယ် ။ သိချင်တာက Vista က ၂၀၀၈ ကိုလဲလက်မခံဘူး ။၂၀၀၆ တွေကိုလဲ လက်မခံဘူး။ ၂၀၀၇ တုံးကကျ အတော်ကြီးကို အင်စတောလိုက်ရတယ်။ ဒါတောင် စွတ်ရွတ်ပြီး အတင်းထိုးထည့်ထားလို့ လက်မခံချင်ခံချင်နဲ့ လက်ခံပြီး အင်စတောခံတာလားမသိဘူး။ လတော်တော်ကြာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်စက်မှာ CD Drive ပြဿနာဖြစ်နေလို့ Acer ရဲ့ Custom Service ဆီသွားတဲ့အခါ ...၂၀၀၇ ကိုညွှန်ပြပြီး ဒီဟာက Vista နဲ့ Uncompatiable မို့ မတင်ထားသင့်ကြောင်း .... စက်ကို နောက်ပိုင်းတွေမှာ ပြဿနာ ပေးတတ်တယ်ဆိုပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ စက်ရဲ့ HDD ကို Format ချလိုက်ရတယ် ...CD Drive ပြဿနာ အတွက်။ ဒါကြောင့် ခု ၂၀၀၈ ကို တင်ကြည့်တယ် ။ ဒါလဲ မရဘူး ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း error တက်နေတယ်။ ကဲ ...ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမလဲ ။ သိတဲ့သူများ အကြံညဏ်လေး ပေးကြအုံး ။ :-[
AutoCad 2008 ကျနော်တို့ဆီက Vista မှာရပါတယ်.. ultimate version ပါ..
အဲဒီ problem က Dotnet Framework or antivirus ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်..ခဏDisableကြည့်ပေါ့
anti virus ကို ဘာသုံးလဲမသိ..
dotnet framework ကရော version ဘယ်လောက်လဲ..
cd ကနေ စက်အပေါ်အရင်တင်ပြီးမှ install သင့်တယ်...
မရရင် ACAD 2009 IS HERE (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,195.0.html)
ဟုတ်ကဲ့ဗျ...Norton Internet Security 2007 လက်ရှိသုံးနေတယ်ဗျ။
ဟို Dotnet Framework ကဘယ်မှာရှာကြည့်ရမတုံး...အဟဲ...အဲဒါတော့ အရင်ကမြင်ဘူးသလိုလိုတော့ရှိတယ်။ ဘယ်ထဲ ရှာကြည့်ရင်တွေ့မလဲခင်ဗျ။
ကိုရေခါးပြောသလို စီဒီကနေ စက်ပေါ် အရင်တင်ကြည့်ပြီး စမ်းကြည့်ပါအုံးမယ် ။
ကိုရေခါး- ဒီကနေ ၂၀၀၉ ကို ယူတာမရတော့..သူများပေးလာတဲ့ ၂၀၀၉ ကို အင်စတောလိုက်တယ်။ ခက်တာက Trial Version ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ Crack ဖြစ်ဖြစ် ရနိူင်မလား..။
Trial Version နဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်ဘူးနော်..
ကို Mr sailormoon ဆီမှာ လိုင်းမြန်လားဗျ...
ဒါဆို အဲဒီမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,195.0.html) try ကြည့်ပါဦးနော..
Rapid ကတော့ တော်တော်များများရပါတယ်..
your ip is already downloading ဆိုလာရင်တော့..
Direct downloader ကို သုံးပြီးချ..ဒီမှာယူ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,614.0.html)အောက်ကလင့်မှာ Direct downloader ကိုသွားကြည့်ပေးပါ..
အေကက်ခရက် သီးသန့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. စကားဝှက် http://MMM.engineermyanmar.ORG/
သို့သော် Trial မှာ ရမရတော့ မသိပါ.
အေကက်ခရက် ဒေါင်းမည် (http://www.myanmarengineer.org/index.php?ind=downloads&amp;op=entry_view&amp;iden=22)
ကိုရေခါး - ဖိုင်ကို 7zip နဲ့ ဖြည်တာ...Can not open encrypted archive ....ချည်းပြနေတယ်။
စမ်းကြည့်ပေးအုံး ..ကိုရေခါး ။
ကျွန်တော်ရ ထားတဲ့ 2009 က ..Trial ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ Crack မပါလာတာ ..။ အင်စတောပြီးလို့ Run တဲ့အခါကျမှ ...Crack ရှာတာ မပါလာလို့ ..ဒီအတိုင်း ရက် 30 -Unregistered Version ကိုပဲ ခဏ သုံးနေတာ..ယာယီပေါ့။
စမ်းသုံးနေတာတောင်...သုံးရတာ လန်းလွန်းလို့ ...ကြိုက်သွားတယ် ..။ အဟဲ....ကူရှာပေးအုံးနော်..ကိုရေခါး။ ;D
ကျနော့ ခရက်ဖိုင်က WinRar နဲ့ Encrypted လုပ်ထားတာပါ..
Winrar ကို အရင်တင်ထားပါ...
ပြီးပါက ခရက်ဖိုင်အား Right Click ပါ။
Extract Here ကို နှိပ်ပါ..
စကားဝှက်တောင်းလာပါမည်... http://MMM.engineermyanmar.ORG/ အား ကော်ပီကူးပြီး ထည့်ပါ..
(စကားဝှက် (encrypted) မချပဲ ဘယ်လိုမှ တင်ပေးလို့မရလို့ပါ..ကော်ပီရိုက်ခေတ်စားလာပါတယ်..)
;D ;D ;D ကိုရေခါး ရေ - ကြိုးစားလိုက်ရတာ ဗျာ ...rar ကို ဖြည်တာ အခါ ၂၀ မကဘူး ။ နောက်ဆုံးမှ...မဖြည်ချင်ဖြည်ချင် နဲ့ များ ဖြည်သွားလား မသိဘူး။ အလုပ်ထဲက စက်ထဲ 7zip တင်မကဘူး.. winRaR နဲ့ လဲ ဖြည်တာ...ဒီလိုပဲ မရဘူး။ အိမ်ရောက်တော့မှ အိမ်ကစက်နဲ့ ဖြည်တာ...ဒါကိုတောင် winRAR နဲ့ပဲ ...ပတ်စဝဒ် လဲ ကော်ပီ နဲ့ထည့်တယ်..ဒါကိုမှ အခါ ၂၀ ကျော် ကျော် ..စိတ်ဓါတ်တွေ ကျလာတော့မှ.... ကိုယ်တော်က ဖြည်သွားလေရဲ့ ။ အဟဲ..ဘယ်ရမလဲ ဝမ်းသာအားရ ...အမြန်ဆုံးကို..ကီးဂျမ်ထဲ Generate လုပ်ပြီး....Full Version လုပ်တော့သပေါ့။ အရင်တုံးက ဒီ RaR တွေ ဒီလို Fail တခါမှ မဖြစ်ဖူး ဘူးဗျ ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ..ကိုရေခါး ရဲ့ ..အကူအညီကြောင့် ..စိတ်ချမ်းသာ သွားရသပ ။ ;D ;D ;D
I have one of advice that if you want to use Auto CAD 2008 properly, you can install Autodesk Mechanical 2008 trail version with crack keygen and very easy to install in Window vista Ultimate but you need atleast 1G Memory to get well. Right now , i am using that kinds of version.
Good Lucks by using it,
window Vista မှာ Use User Account Control (UAC) လေးကို uncheck လေးလုပ်ပြီးမှ
ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို အင်စတော လုပ်ကြည့်ပါလား
ကျနော့်ကွန်ပျူတာကလဲ Window Vista (Home premium) ပါ
Norton Anti Virus 2008 ကိုလဲတင်ထားတယ်
ကျနော်က UAC ကို off (uncheck) လုပ်ပြီးမှ တင်ချင်တဲ့ software တွေကို အင်စတောလုပ်တာ ဘာမှ ပြဿနာမဖြစ်ဘူး
Etabs , Safe , AutoCad 2006, 2007, Sap2000 စတာတွေ တင်ထားတယ် .. crack လုပ်တာလဲရတယ်
တချို့ပြောကြတာက UAC ဖွင့်ထားရင် အင်စတောလုပ်တာကို လက်ခံရင်တောင် crack လုပ်လို့မရဘူးပြောတယ်
ကျနော့်ကွန်ပျူတာကတော့ ဘာမှ မပြောဘဲ အကုန်လုံးကို အသာတကြည် လက်ခံတယ်ဗျ ...
ကျွန်မ စက်က window xp ပါ Auto CAD 2004 ကို Install လုပ်တောရတယ်
အဲဒီနေ့ပဲ သုံးတာ သုံးလိုရတယ်
အကြောင်းအမျိုးကြောင် စက်မသုံးတာတစ်လလောက် ကြာသွားတယ်
ိုမနေ့က ပြန်ဖွင့်ကြည်တော့&quot;IMPORTANT! your registration is expired&quot; ဆိုပြီး ရှေးသွားလိုမရတေားဘူး
Auto Desk ဆိုတာလည်းပါတယ်
အဲတာ Crack ဖြည်ဖို. လိုပါမယ်။ဘာလို.လဲဆိုတော. 1 month အစမ်းပေးသုံးတဲ. Software ဖြစ်လို.ပါ။တစ်ကယ် ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်သုံးတဲ. Software ဆိုရင် မလိုပါဘူး။ကျွန်တော် တို.အနေနဲ. ဝယ်ဖို.ဆိုတာ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင်. 1 month အစမ်းပေးသုံးတဲ. Softwareကို အမြဲသုံးနိုင်အောင် crack လုပ်သုံး၇တာပါ။Autodesk ဆိုတာ autocad software ထုတ်တဲ.company ပါ။ Install လုပ်တဲ. CD ထဲမှာ crack files နဲ. ဘယ်လိုလုပ်၇မယ်လို. ပြောထားတဲ. read me file ပါပါလိမ်.မယ်။
Autocad Mechanical 2008 မှာ Express Tools bar ကိုplus in လုပ်တာမရဘူး ဖြစ်နေ တယ်..သိသူရှိ ရင်ကူညီ ကြပါအုံး...
ဘယ်လို install လုပ်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ...နည်းနည်းတော.ပြောပြပါဦး။
ဒီလို ပါ ကျွန်တော် က Autocad Mechanical 2008 ကို install လုပ်ပြီးသား ပါ ..ခက်တာကအဲဒီ software မှာက Express Tool set up file ပါမလာပါဘူး ဒါကြောင့်အပြင်ကနေ ပြီးတော့ Express Tools Bar ကိုထပ်ပြီး တော့ install လုပ်ချင်တာပါ.. တခြား autocad 2007 နဲ့ 2008 မှာ Express Tools ပါပြီး သားပါ ..Mechanical 2008 မှာမပါ ဘူးဖြစ်နေ လို့ အစ်ကို သိရင် ကူညီပေး စေချင်ပါ တယ်...
Published date: 2006-Mar-31
Autodesk Inventor® Professional 10
To install the AutoCAD express tools, you need to select the Custom installation option during setup.
If you have already installed the application, you will need to modify the original installation. Follow these steps:
1. On the Start menu (Windows), click Settings &gt; Control Panel.
2. In Control Panel, double-click Add\_Remove programs.
3. Select the application. Click Change.
4. In the Autodesk Inventor Setup wizard, under Application Maintenance, select Modify. Click Next.
5. Under Select Features, select AutoCAD Express Tools.
6. Follow the prompts in the setup wizard to complete the modification process.
ဒီpost က autodesk က ကူးပေးထားတာပါ။step5က software version တွေကို *active cd shop နဲ. national cd shop တွေမှာရှိမယ်လို.ထင်ပါတယ်။လိပ်စာမသိ၇င် internet journal မှာကြည်.ပါ။မ၇မှ autocad 2008 cd ကို သုံးပြီး express tool ကို custom install လုပ်ကြည်.ပါ။
Hello you&#039;all ,:)
Glad to meet you ! I&#039;m cho.
I&#039;ve got IT Degree.But I &#039;m not clever asaProgrammer.Now I&#039;m learning Auto Cad.
So , I wanna choose Auto Cad as my carrier.Can i ? And sometimes, I &#039;ve two of minds of my decision. My friends told me that it is not concerning with our field. Let me know your opinion.
p.s; I&#039;m afraid of to post it ! If i makesamistake, please don&#039;t think of badly me !
ဟုတ်ပါတယ် ...IT ဘွဲ့လဲရပြီး IT ခေတ်မှာ Autocad ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ တမျိုးချည်းပဲနော်။Ok ပါ ....ကို့ကိုယ်ကို Autocad ကိုတကယ်
လုပ်ချင်တာသေချာပြီလား ဆိုတာအရင်ဆန်းစစ်ပါ။သေချာပြီ ဆိုရင်နောက်မဆုတ်တမ်း လုပ်ရမှာပါ။
Autocad job မှာ အကြမ်းအားဖြင့် Draft man , cad operator and autocad designer ရယ်လို့ရှိပါတယ်။autocad designer ကတော့ ပုံဆွဲရုံတင်မဟုတ်ပဲ civil,electrical,mechanical...etc သက်ဆိုင်ရာ engineering knowledge ပေါ်မူတည်ပြီး လိုတာတွေအကုန် ဖြည့်ဆွဲပေးရပါတယ်။
Draft man ကတော့ပေးထားတဲ့အတိုင်း ပုံတူဆွဲပေးရတော့ software skill ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။cad operator ကတော့..eg..design team တစ်ခုလုံး
မှာသုံးတဲ့ autocad နဲ့ပတ်သက်တဲ့ problem တွေ cad management တွေ အကုန် solve လုပ်ပေးနိုင်ရမှာပါ။..autolisp ပါတတ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
Now you can make decision your self!
ဖြစ်ဘူးကြလားမသိဘူး၊ငြိမ်ငြိမ်မနေပဲ autocad ကိုကလိတာ tool bar ပျောက်သွားတာမျိုးလေ။ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲမသိရင်တော်တော်လေးကိုဂွကျတာဗျ။လွယ်ပါတယ်ဗျာ။tool ထဲက workspaces ထဲက autocad classic မှာ click လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း command line ကနေ cui ဆိုပြီး type လိုက်။ပြီးရင် box ကျလာရင် customizations in all cui files အောက်က look in ရဲ့ down arrow မှာ all customization files ထား။ပြီးရင် acad အောက်က workspaces အောက်က autocad classic default မှာ right click လုပ်။set current လုပ်။apply\_ok။ ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။
Friend ရေ ဖြစ်နိုင်ရင် &quot;autocad tip &amp; tricks &quot;အောက်မှာ ဒါမျိုးလေးတွေရေးပေးပါနော်။
အခက်အခဲ ရှိတာ၊ လိုအပ်တာတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
အခက်အခဲတွေရှိလို့ဒီကိုလာပါပြီ၊ကူညီကြပါဦး....။ဒီလိုပါ.. folder တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့Auto Cad File အခု ၅၀ လောက်(ပုံ၅၀)ကိုTitle ပေးတဲ့အခါ Drawing name နဲ့ Drawing number တပ်ရာမှာ Drawing တစ်ခုခြင်းဆီဖွင့်ြ့ပီး No-1...No-2...No-3... ...No-50 အစရှိသဖြင့် one by one မလုပ်နေပဲ တခါတည်းနဲ့ ရေးထည့်လို့ရတဲ့နည်းလေးများရှိရင်ကူညီကြပါဦး။(File number မဟုတ် Drawing တွေရဲ့အောက်မှာရေးလေ့ရှိတဲ့ Drawing number ပါ။)
သိချင်တာလေးတစ်ခုလောက် ရှိလို့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော်က Mechanical ကပါ။ အဲ... Design ပိုင်းကိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ..။
ဖြစ်ချင်တာကတော့ Mechanical Designer ကြီးပေါ့။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Auto CAD ကိုလေ့လာနေပါတယ်။ တတ်သင့်သလောက်တော့ တတ်နေပါပြီ။
အဲ... Master CAM လဲ နဲနဲပါးပါး တတ်တယ်ဗျ။
ခက်တာက CAD Software တွေက အများကြီး။
ပြောကြတာတွေက တစ်မျိုးတစ်ခုကောင်းတွေ၊ ဘယ်ဟာရွေးလို့ရွေးရမလဲသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ software နှစ်ခုလောက်ကိုပဲ လေ့လာနိုင်မယ်ထင်တယ်။
အဲ့ဒါ ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးသင့်တယ်ဆိုတာ လမ်းပြပေးကြပါလား။
Autocad mechanical ...software ကိုလေ့လာကြည့်ပါလား။
autocad file ထဲမှာစာရိုက်တာကိုပြောတာလား... ???
Brother papagi ရေ....ကျွန်တော့ကို Auto CAD နဲ့ Auto CAD Mechanical နဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လိုကွာတယ် ဆိုတာ.. နဲနဲလောက် ပြောပြပေးပါလား။သိချင်လို့ပါ။ Auto CAD Mechanical ကိုအစကတည်းက စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ software တွေလည်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။
အဲ့ဒါလေး တစ်ချက်လောက် ကူညီပေးကြပါအုံး။....
This is the version of your computer.So,you should use the other version of Vista.If you have any difficulty in your computer please contact to my mail(zayaroo2008@gmail.com).
ကိုပါကြီးမအားဝူးထင်လို့ပါ....Top 10 Reasons to Move from AutoCAD® to AutoCAD® Mechanical 2009 ချန်းချန်းကတော့ဒီလင့်လေးတခုကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်...
စာရိုက်တာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ok .... စာရိုက်တာပဲထားပါ။ဥပမာဗျာ...Auto Cad File ၁၀ ခုရှိမယ်၊(ပုံ ၁၀ ပုံပေါ့ )။ အဲ့ပုံတိုင်းရဲ့တနေရာရာမှာ Drawing ရဲ့ရေးဆွဲသူအဖြစ် papagyi -No-1 ဆိုပြီး Multiline Text ပါနေမယ်။ ကျနော်လိုခြင်တာက File Number-1ကိုဖွင့်ရင် ပြသနာမရှိပေမဲ့ File Number -2 ကိုဖွင့်ရင် papagyi-No-2, File Number-3 ကိုဖွင့်ရင် papagyi-No-3, ဆိုပြီးအစရှိသဖြင့် နောက်ဆုံး ဂဏန်းလေးတွေကိုပဲပြောင်းသွားခြင်တယ်။ ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ file တခုဖွင့်လိုက် ဂဏန်လေးပြင်လိုက်နဲ့မလုပ်ခြင်လို့။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းလမ်းလေးတခုလောက်လိုခြင်လို့ပါ။
နည်းလမ်းတခုတော့စဉ်းစားမိပါတယ်... drawing template .dwt တော့သုံးရပါမယ်... အဲ့ဒိ template ရဲ့ drawing No. နေရာမှာ ချန်းချန်း attach လုပ်ထားတဲ့ text လေးကို စိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီး ထားပါ... ဒါပေမယ့် drawing file name ကို တော့ drawing no အတိုင်းပေးရပါလိမ့်မယ်.. (အဲ့ဒိလိုလည်း ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ file ကို မြင်တာနဲ့ auto cad ကိုဖွင့်ဖို့မလိုပဲဒါဘာပုံဆိုတာသိနေနိုင်ဖို့နဲ့ file တွေအစဉ်လိုက်ရှိနေနိုင်ဖို့က file name နဲ့စီတာက ပို အဆင်ပြေတယ်လေ..)
ဒါဆိုရင် အဲ့ဒိ rtext လေးက drawing file name အတိုင်း ပေါ်ပါလိမ့်မယ်.. အမြဲတမ်း create လုပ်နေဖို့မလိုသလို edit လုပ်နေဖို့လည်း မလိုတော့ဖူးပေါ့... file name ပြောင်းရင် drawing no လည်းပြောင်းနေပါလိမ့်မယ်...(အဲ့ဒိ rtext ရဲ့ disel function က dwg no နေရာမှာ dwg name ကို ယူပြတဲ့သဘောပါ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါတယ်) .dwg attach လုပ်မရလို့ .dwg.txt နဲ့လုပ်လိုက်ရပါတယ် txt လေးဖျက်ပြီးမှ open လုပ်ပါနော်...
[quote]ဟုတ်ကဲ့ ချန်း .. try ကြည့်လိုက်မယ်။ကျေးဇူး[quote]
rtext က dwgname ကြောင့် ဖိုင်နံပါတ်နေရာမှာ .dwg ဆိုတာကြီးဆက်ပါနေတယ်..
ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့နောက်တစ်ခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒါက ရိုးရိုး mtext ကိုပဲ field လေးတခုထည့်ထားတာပါ..
မသုံးခင် autocad ရဲ့ fielddisplay variable ကို zero ပေးထားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်...
command line မှာ fielddisplay .. enter
0 ... enter ပါ...
ရိုးရိုး auto CAD 2008 နဲ့ auto CAD mech 08 ...interface ကို တွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
acad မှာ tool menu ကို acad mech မှာတော့ assist , draw menu ကို design ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်....
acad mech ဆိုပြီး ဖြစ်လာရတာကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ Content ဆိုတဲ့ menu ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်....
Thank you ပါ ကို Chan ရေ။... :) :)
ကျွန်တော်အခုတလော အလုပ်လည်းရှုပ် နေလည်းသိပ်မကောင်းလို့ပါ။
အဆင်ပြေသလို ရေးပါဦး။posts အသစ်တွေရောပေါ့.... :) :)
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် Autocad Mechanical စလိုက်နေပြီ ...ဟဲဟဲ..
နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ Website ကောင်းလေးတွေ Reference ကောင်းလေးတွေရှိရင်
ကျနော် ဒီမှာပဲဝင်မေးလိုက်အုံးမယ် ... သိချင်တာတွေက ...
၁ - array လုပ်တာမှာ ... rectangular နဲ့ polar ပဲလုပ်လို့ ရတာလား ... ။ မျဉ်းကွေး လမ်းကြောင်း path တစ်လျှောက် မှာ array လုပ်လို့ ရလား ...။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ..?
၂ - Paraboloid ပုံတွေ ကို ဘယ်လိုဆွဲရလဲ ...?
၃ - Rectangular Block တုံး ပုံကို ဒီလို ပုံ မျိုး ဖြစ်အောင် Edit ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ
ကျနော့် အနီး အနားမှာ မေးဖို့ မြန်းဖို့ မလွယ်လို့ ပါ ...
၁-Auto CAD ရဲ့ array က rectangular , polar နဲ့ (Z-axis ပါ ပါဝင်တဲ့) 3d array တို့ပဲရှိပါတယ်..
တကယ်လို့ မျဉ်းကွေးလမ်းကြောင်း path တစ်လျှောက်မှာ array လုပ်ချင်ရင် measure ဆိုတဲ့ command ကို block option သုံးပြီး စမ်းကြည့်ပါ..
၂-paraboloid ပုံအတွက် တော့ rev ဆို့တဲ့ command နဲ့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်....
အဲ့ဒိပုံထဲကလို block တုံးမျိုးရချင်ရင်တော့ loft ဆို့တဲ့ command နဲ့စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်...
ကို chan ပြောသလိုပဲ loft command နဲ့ အသစ်ဆွဲရမှာပါ။...နဂို Rectangular Block ကို edit လုပ်လို့ မရပါဘူး။
Loft command က acad 2007/8/9 တွေမှာပဲပါပါတယ်။..earlier version တွေဆိုရင်တော့ surface နဲ့ပဲဆွဲလို့
အဆင်ပြေမှာပါ။ :) :)
autocad နဲ့ Estimate တွက် လို့ ရ တဲ့ software အ ကြောင်း သိ ရင် ပြော ပြ ပါ နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ estimate ပိုင်းမနီးစပ်ပါဘူး။ဒီlink လေးမှာတော့
လေ့လာကြည့်ပါလား....ကြိုက်ရင် forum မှာ software request လုပ်ကြည့်ပေါ့
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; When I&#039;ve&#160; read about CAD, that topic so called LSP remind me .May i know where can i get free LSP !&quot;Cos i&#039;ve some problem to cut and combine 3D surface..the name are xslice and sew .But i&#039;ve no idea how to do!!
First register to www.cadtutor.net !Second you can find in this thread..http://www.cadtutor.net/forum/forumdisplay.php?f=30
If you will not find,you can request!....go ahead! :) :)
estimate ကို ကျွန်တော်တို့Excel နဲ့ Autocad တွဲပြီးတွက်တာပဲကြားဖူးပါတယ်
တကယ်လို့မှားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ...
ဟုတ်ပါတယ်။..excel နဲ့တွဲတွက်ပါတယ်။....europe မှာတော့ autocad က spread sheet တွေနဲ့ link ချိတ်ပြီးတွက်
ကြတာတော့သိဘူးပါတယ်။ဒါတွေက autocad နဲ့ link ပဲယူထားတာပါ။..Autodesk က cad software တွေနဲ့
တွဲတတ်တဲ့ estimate software တွေထုတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည် မမှတ်မိလို့ပါ။Nation cd မှာ ရှိပါတယ်။
စမ်းကြည့်ပြီး sharing ပြန်လုပ်ပေးပေါ့။ :) :)
အခက်အခဲတွေရှိလို့ရောက်လာပြန်ပါပြီ၊ ကူပါဦးခင်ဗျ- ခုပြတဲ့ ပထမပုံက sheet metal လေးကိုကွေးထားတာပါ၊ Dimension ရှိလို့ ဆွဲရတာချောချောချူချူ ပြီးသွားပါတယ်။
&lt;a href=&quot;http://tinypic.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i43.tinypic.com/auz41x.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image and video hosting by TinyPic&quot;&gt;&lt;/a&gt;
ဒုတိယပုံကတော့ ပထမပုံဆီကနေ Dimension တွေကိုပြန်ထုတ်ပြီး သပ်သပ်ထပ်ဆွဲလိုက်ရပါတယ်။
&lt;a href=&quot;http://tinypic.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i43.tinypic.com/2usipus.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Image and video hosting by TinyPic&quot;&gt;&lt;/a&gt;
တကယ်လိုချင်တာက ပထမပုံကိုပဲ ဖြန့်ထုတ်လိုက်ချင်တာပါ။ Command တော့သီးသန့်မရှိဘူးထင်တယ်နော်၊ ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေး ခဏလောက်လမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျ။ဒါလေးကိုရပြီး မှကျန်တာဆက်လုပ်လို့ရမှာမို့ စောင့်နေပါ့မယ်။
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ထင်တာလေးပြောလိုက်မယ်နော်။ပုံမှာ circle ပြတ်လေးတစ်ခုဆွဲပြီး ...list command နဲ့ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း
အဝန်းပတ်လည် အလျား 66.6795 ကိုရပါတယ်။ပြီးတော့3unit ထုပေးတယ်။ဖြန့်မယ်ဆိုရင် (3 , 66.795 ) rectangle ပုံလေးရမှာပါ။
thickness ကတော့ ကိုယ်ထည့်ရင်ထည့်တဲ့ထုပေါ့။ :) :)
http://www.litio3d.com.ar/shots2.htm အဲ့ဒိ site ကို အလည်အပတ်သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်.. litio ဆိုတာ unfolder ဆောဝ်၀ဲ auto CAD မှာ third party software တခုပါပဲ... auto CAD က sheet metal တွေကို auto မဖြန့်ပေးနိုင်သေးပါဝူး.. တကယ်လို့ solid work သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်တော်ပါတယ်.. တင်ပေးထားတဲ့ပုံကို ကြည့်ရတာတော့ အဖျားနှစ်ခုက width မတူတဲ့ ရှုးကား shapeကို အဖျားနှစ်ခုမှာ ဒီဇိုင်းလေးပါ
ထပ်ထည့်ထားတာမျိုးထင်ပါတယ်.. ချန်းချန်းကတော့ litio3d ကို ညွှန်းပါတယ်.. auto CAD နဲ့မရမက ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ကို papagyi ပြောသလို list command ကို သုံးပြီးတွက်ထုတ် သင့်ပါတယ်.. အရင်ဆုံး 3d solid ကို ကော်ပီပွား explode လုပ်ပြီး face တွေကို ထပ်explode လုပ် ရလာတဲ့ လိုင်း arc တွေကို list နဲ့ length ကြည့်ပြီး develop drawing ပြန် ဖေါ်ရမှာပါ.. solid edit tool bar က copy edge ကို သုံးရင်လည်းသင့်တော်ပါတယ်...
When I&#039;ve read about CAD, that topic so called LSP remind me .May i know where can i get free LSP !&quot;Cos i&#039;ve some problem to cut and combine 3D surface..the name are xslice and sew .But i&#039;ve no idea how to do!!
http://204.101.252.14/library/lisp0a.html (http://204.101.252.14/library/lisp0a.html) အဲ့ဒိလင့်ကနေ auto lisp source code တချို့ကို ရယူပါ..
တော်တော်စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်.. lsip file ဇီးရိုး toato z ပါ... free download ပါပဲခင်ဗျာ....
ဟုတ်ကဲ့ ကိုpapagyi နဲ့ ချန်း ကိုကျေးဇူးပါ၊ ခုပုံက ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ok ပါ။ ဒါပေမယ့် အနားစောင်း လေး တချို့ကိုZoom နဲ့ကြည့် မယ်ဆို ရင် ပုံသဏ္ဍန်မ မှန်တဲ့ slope လေးတွေရှိနေပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကိုတော့ မူရင်းပုံကနေမှ မယူဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမှတိကျအောင်ထပ်ဆွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။အခုခြေအေနေကလဲ အဲ့ဒီအသေးစိပ်ကအစလိုနေတော့ ခက်နေရတာပါ။ (Sheet metal လို့သာလွယ်လွယ်သုံးလိုက်တာ thickness 15mm ရှိတဲ့ plate ကွေးကြီးတွေကို Machining လုပ်ဖို့ flat ပုံထုတ်နေရပါတယ်၊ ခုပုံက ဥပမာပုံစံတခုပါ။)
ကိုချမ်း ပေးတဲ့ link တွေထဲလေ့လာကြည့်ပါ့မယ်။
တခြားလည်း ခေါင်းစဉ်အသစ်မတင်တော့ပါဝူး... နဲနဲခံစားရလို့ရင်ဖွင့်တာပါ...
ချန်းချန်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး flash file သင်ထောက်ကူလေးတွေ လုပ်ခဲ့မိပါတယ်..
နောက်ပိုင်းတခြား သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share လုပ်ရင်းနဲ့ ဆိုင်တွေပေါ်တင်ဖို့ သူငယ်ချင်းတယောက်က အကြံပေးတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်မြို့က ဆိုင်တချို့ကို ဖြန့်ချိရောင်းချစေခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒိလို မလုပ်ခင် ချန်းချန်းရဲ့ ဆရာရင်းဆီကို ချန်းချန်းအခွေလေးပြပြီး စီဒီအဖြစ်ထွက်လာစေဖို့ ပြောဆိုဖူးပါတယ်.. အဲ့ဒိတုန်းက ချန်းချန်းစိတ်ထဲမှာရှိတာ က ချန်းချန်း ဖန်းတီးလိုက်တဲ့ အနုပညာတခုကို ပရိတ်သတ်က အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးတခုကို ရချင်ခဲ့တာပါ.. တခြား ဘာကိုမှ (အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံ....)မရချင်ခဲ့ပါဝူး... ချန်းချန်းရဲ့ဆရာက စိတ်မ၀င်စားဖူးလို့ ချန်းချန်းကို ပြောခဲ့တာကြောင့်..ဆရာဦးအောင်မြင့်ဆီကို တိုင်ပင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.. ဆရာဦးအောင်မြင့်ရဲ့ စာအုပ်တိုက်က ၀န်ထမ်းလေးက ဆရာဦးအောင်မြင့်က စာအုပ်ပဲထုတ်တာ ခင်ဗျားစီဒီ မဖြစ်နိုင်ဖူး ဆိုတဲ့စကားတခုကလွဲရင် ဆရာဦးအောင်မြင့်နဲ့တောင်မတွေ့ခဲ့ရပါဝူး... ဒါနဲ့ ဆရာအောင်လင်း ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်.. ဆရာဦးအောင်လင်းက ချန်းချန်း အခွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပေးပြီး ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေကို စေတနာအပြည့်နဲ့ပေးပါတယ်.. (အဲ့ဒိအတွက် ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်..) ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဝူး.. မှတ်မိသလောက် ချန်းချန်း အဲ့ဒိအခွေချပ်လေးကို ဒီအတိုင်းပဲယူထားပါ.. ဆိုင်တွေပေါ်မှာတခြား စီဒီတွေနဲ့အတူ တွေ့နေရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ အလကားပေးခဲ့တာတောင် ချန်းချန်း စီဒီလေးတွေမျက်နှာငယ်ခဲ့ရပါတယ်..ချန်းချန်းရင်ကဖြစ်တဲ့သားအတွက် ချန်းချန်းဘာသာ ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင် စခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒိတုန်းက ချန်းချန်းဆိုတာက သူငယ်ချင်းတချို့ကလွဲရင် သိသူအင်မတန်ရှားပါတယ်.. စီဒီဆိုင်တွေကို ရောင်းပြီးမှ ပိုက်ဆံရှင်းပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျက်နှာငယ်ငယ် နဲ့အောက်ကျို့တောင်းပန်ပြီး တင်ခိုင်းခဲ့ရပါတယ်.. (တချို့ဆိုင်တွေရဲ့ အပြောအဆိုကြောင့် ချန်းချန်းဘယ်ဘက်ရင်ရင်ဘက်အောင့်ခဲ့ ရတာကို ပြန်သတိရမိပါသေးတယ်...) စီဒီ တွေဗန်းနေတဲ့ သားဖြစ်သူကို မေမေကတောင် မင်းအခွေတွေကတော့ ကံမကောင်းကြပါဝူးလို့ သနားနေခဲ့ပါသေးတယ်.. ချန်းချန်းက ချန်းချန်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာအတွက် (ကွာလတီမကောင်းပေမယ့် စေတနာတွေအပြည့်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ...) ၆ လအတွင်း အရင်းမကျေခဲ့ရင် စီဒီတွေအကုန် ရန်ကုန်မြစ်ထဲမြော ပစ်မယ် လို့ စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ..( ၆ လအတွင် အရင် မကျေခဲ့ပေမယ့် ကျေနပ်လောက်စရာ response တွေတော့ရခဲ့ပါတယ်) အဲ့ဒါ ပထမဆုံးစီဒီ Learning Auto CAD (vol:1) ပါ... နောက်ပိုင်းမှာတော့ တချို့သောသူငယ်ချင်းတွေ ၊ စီဒီလေ့လာတဲ့သူတွေရဲ့ အကြံပေးချက်အတိုင်း Advance ပိုင်းပါစုံလင်အောင် vol:2 ကို ထပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်.. နောက်လည်း အခွေတွေလုပ်နေဖြစ်ခဲ့တာ ချန်းချန်းစင်္ကာပူကို ထွက်မလာခင်အထိပါပဲ...၂၀၀၇ နှစ်ဆန်းပိုင်း စင်္ကာပူမထွက်လာခင်မှာပဲ ချန်းချန်း ချစ်မြက်နိုးရတဲ့ တစုံတယောက်ကို အဲ့ဒိအခွေတွေအကုန်လုံး လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...
အဲ့ဒိလိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ချန်းချန်းစီဒီလေးတွေ စီးတီးဟောက ပင်နီဆူလာမှာ ကြော်ငြာပြီးရောင်းနေတယ်လို့ သူများတွေဖုန်းဆက်ပြောတော့မယုံနိုင်ရဲခဲ့ပါဝူး.. ဒါနဲ့ မနေ့က စီးတီးဟောကိုသွားကြည့်မိတော့ MSCT PTE LTD မှာ ချန်းချန်း စီးဒီလေးတွေ ကာဗာပြောင်းပြီး ရောင်းချနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. (ချန်းချန်းတို့များ နာမည်ကြီးချင်တော့ နိုင်ငံခြားမှာပါ လာနာမည်ကြီးနေတာကိုး....ဟိဟိ) ဒါတွေဒီမှာရောင်းတာလားဆိုတော့ MSCT PTE LTD က ဟုတ်ပါတယ် တယ် တဲ့ .. တချပ်ဘယ်လောက်ပါလဲ ဆိုတော့ $10 ပါတဲ့.. (ရန်ကုန်မှာတော့ ခုနေရှင်နယ် စီဒီမှာ တချပ် ၁၅၀၀ နဲ့ရောင်းတယ် လို့သိရပါတယ်) ကျတော်က ဒီအခွေတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ချန်းချန်း ပါပဲ ။ ချန်းချန်းတခါမှလည်း စင်းမှာ အခွေမရောင်းခဲ့ပါဝူး.. ဒါတွေက ရန်ကုန်ကတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့ အခွေ တွေလည်းမဟုတ်ပါဝူး..( ချန်းချန်းအခွေတိုင်းမှာချန်းချန်း အမှတ်တံဆိပ် ပါပါတယ်..) နောက်ပြီးချန်းချန်းလက်ထဲကကိုင်ထားမိတဲ့ အခွေက Learning Microstation ပါ.. အဲ့ဒိ အခွေမှာ MicrostationPowerdrat Installer Inside ဆိုပြီး ချန်းချန်းရေးခဲ့ တဲ့အတိုင်းတော့ပါရှိပါတယ်... ချန်းချန်း ရဲ့ auto CAD အခွေတွေမှာလည်း auto CAD installer (၂၀၀၄) ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်လို့.. စင်းဥပဒေ ရဲ့ Pirated Software သုံးစွဲ သူ ၊ ရောင်းဝယ် သူတွေအတွက် ဖိုင်း ကဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိထားဖူးလို့ ချန်းချန်း ရဲ့ lap top ထဲမှာတောင် ဘာpirated ဆောဖ်ဝဲမှာ installed လုပ်မသုံးရဲခဲ့ပါဝူး.. MSCT ကို ချန်းချန်း မေးတော့ သူများတင်ရောင်းခိုင်းတာလို့ဖြေပါတယ်... အဲ့ဒိလူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးသိပရစေဆိုတော့ မသိပါဝူးတဲ့.. စင်း မှာ စီးပွားရေးလုပ်နေသူတယောက်အနေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် မသိဝူး မမှတ်ထားဝူးဆိုတာ သိပ်တော့သဘာဝမကျဝူးလို့တော့ထင်ပါတယ်.. ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ချန်းချန်း ကို ခွင်းတောင်းသင့်တယ်လို့ တော့ထင်မိတာပဲပါပဲ... ရန်ကုန်က ချန်းချန်း ချစ်လှစွာသော တစုံတယောက်က လုံးလုံးမသိပါဝူး... ချန်းချန်းအနေနဲ့ လည်း ပညာကို သေရွာမယူချင်လို့ တတ်နိုင်သလောက် share လုပ်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတယောက်ပါ.. ချန်းချန်းအခွေကို ၀ယ်ယူပြီးလေ့လာသူအနေနဲ့ ၄င်းရဲ့ ခင်မင်သူတွေကို ကော်ပီကူး ပြီး ရှဲးတာမျိုးကို လက်ခံပေမယ့် ခုလို့ ကာဗာပြောင်း ကြော်ငြာတင်ပြီး စီးပွားရေးဆန်ဆန် ရိုက်စားလုပ်တာမျိုးကျတော့ ချန်းချန်း ခံစားရပါတယ်... မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ချန်းချန်း အခွေတွေထဲမှာလည်း ချန်းချန်း မေးလ်ကနေတဆင့် အဆင်မပြေတာ ၊ အခက်အခဲ တွေ့နေတာရှိရင် အွန်လိုင်းကနေ ကူညီပေးသွား တာမျိုးကို တော့ချန်းချန်း အချိန်ပေးနိုင်သလောက် တတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားချင်ပေမယ့်.. တခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာမျိုးကို တော့ ချန်းချန်း မဖြေရှင်း ချင်ပါဝူး ..
ချန်းချန်း ရင်ဖွင့်ယုံသတ်သတ်ပါပဲ... တခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှမပါ ပါဝူး....
ကိုချန်းရေ- ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ၊ အင်း ရင်ကမွေးထားတဲ့သား ၊ ဟုတ်ပါတယ်ကိုချန်း အရမ်းကိုခံစားနားလည်မ်ိပါတယ်၊ ကိုယ် ရေးထား တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုစ့် လေးတခုတောင် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မပြောမဆိုနဲ့ အခြား ဖိုရမ်မှာတင်ထားရင်တောင်ခံရခက်ကြရ သေးတာပဲ ၊ ခုလိုကြီးကတော့ဗျာ....။ အတတ်ပညာတခုကို လေ့လာလိုက်စားစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်ချပြဖို့ဆိုတာအတော့်ကိုမလွယ်လှတာပါ၊ စေတနာအပြည့်နဲ့ ရုန်းကန် မွေးဖွား ကျော်လွား ရပြီး ၊ အောင်မြင်မှူလေးကျတော့ အညွန့်နုနုလေးကိုဆက်ခနဲ ဆိတ်ပြီးချက်စားသလိုမျိုးကြီး။ အတော့ကိုစိတ်မကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နားလည် ကိုယ်ချင်းစာပေးတဲ့ ကို phyomaung ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ချန်းချန်း အနေနဲ့လည်း တခုခုတော့ နည်းလမ်းရှာကြည့်ပါအုံးမယ်..
အဲ့ဒိဆိုင်ရှင် ကို အီးမေးလ်ပို့တော့လည်း reply တောင်မပြန်ဝူး... ဒီညနေလေးကပဲ
သူငယ်ချင်း တယောက်က ထပ်ဖုန်းဆက်ပြီးမေးသေးတယ် ..အဲ့ဒိဆိုင်က ကြော်ငြာ
ကိုဖတ်ပြီးတော့လေ... အဲ့ဒိဆိုင်က cyber cafe နဲ့ cd ဆိုင် ကိုတွဲဖွင့်ထားတာလေ..
တချို့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အဲ့ဒိဘက်ကို ခနခနရောက်နေတော့ ချန်းချန်းဆိုတာ
သူတို့ သူငယ်ချင်းပဲဆိုပြီးသိထားသူတွေက ချန်းချန်းတော့စီးပွားရေး သောင်းကျန်းနေပြီ
လို့နောက်ပြောင်ခံရတော့တာပါပဲ.... တကယ်တော့ ချန်းချန်းလည်း Auto CAD ကို ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့
် engineering အသိနဲ့ပေါင်းပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရပ်တခုအဖြစ်အသုံးပြုနေခဲ့တာပါပဲ...
တော်ရုံ တန်ရုံဈေးလောက်နဲ့ဆို ချန်းချန်းအနေနဲ့ ပညာရှာသူတွေ အကျိုးရှိမှာမို့ မပြောပလောက်ပေမယ့်..
၁ ကျပ်ရင်းပြီး ၁၀ ရချင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားကြောင့် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ချန်းချန်း လူအထင်လွဲခံရကိန်းဆိုက်နေတာ တခုကြောင့် ပါ..
ချန်းချန်း( mg mine )
&gt;:(သိပ်ဆိုးတဲ့သူတွေပဲဗျာ.....ရအောင်တော့စောင့်ကြည့်ပြီးပြောသင့်တယ်။ရန်ကုန် national CD မှာရောကိုချန်းရောင်းထားတုန်းပဲလား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ...acad vol 1 &amp;2,microstation ,...acad 3d block..cd တွေ ..ထပ်ထပ်တင်ထားတုန်းမို့ပါ။
နေရှင်နယ်စီဒီနဲ့ lucky life ကိုတော့ ချန်းချန်းစီဒီတွေကို ဆက်လက်ရောင်းချစေခဲ့ပါတယ်...
နေရှင်နယ်စီဒီကိုတော့ ချန်းချန်းကျေးဇူးတင်ရမယ့်ထဲ ထည့်ထားပါတယ်... ချန်းချန်းအခွေလေးတွေဘာမှမဟုတ်ခင်ထဲက နေ ခုလိုလူသိသွားစေခဲ့တာ
နေရှင်နယ် ကျေးဇူးကြောင့်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဝူး... ရန်ကုန်က နေရှင်နယ် ၂ ဆိုင် အပြင် မန္ထလေးထိ အောင် ချန်းချန်းအခွေလေးတွေရောက်စေခဲ့လို့ပါ..
ခုတော့ စင်း က စီးတီးဟောမှာ ကတော့ ဒီစီးပွားရေးသမား က ခိုးကူးပြီးပုံမှား ရိုက်တာမျိုးမို့ပါ...
(ချန်းချန်း အခွေလေးတွေဟာ အပျော်တမ်း လက်ဖြစ်စီဒီလေးတွေပါ... export quality မမှီတာကိုလည်း ချန်းချန်းဘာသာသိပါတယ်.. )
အထူးသဖြင့် ချန်းချန်းရဲ့ ငှက်ဆိုးထိုးသံလေးနဲ့ ပုံရိပ် resolution ..audio ပိုင်း visual ပိုင်း အများကြီးလိုပါသေးတယ်...
I can&#039;t reinstall the autocad 2009 after uninstalling it on windows Vista. I had already installed on that PC at that time it was easily installed. When install it,
Acad 2009 install is forbidden by the System Administrator is appeared.
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကိုချန်းရေ.... Copy Right မရှိတဲ့ဘ၀မှာ ..... ဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..... စတင် ဖန်တီးသူက ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်တွေ... လေ့လာလိုက်စားလိုက်ရင်း.......ရင်နဲ့ခံစားပြီး ရင်းနှီးလိုက်ရတာ.......... ဘာရယ်ကိုမှ မမျှော်လင့်ပေမယ့်....... အသိအမှတ်ပြုမှု တစ်ခုလောက် ရခဲ့ရင် ...... တော်သေးတာပေါ့နော်....... (ဒီလိုလေး အသိအမှတ် ပြုခံရရင်ကို... ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးထားတဲ့လမ်းကို ဆက်လျှောက်ဖို့ အင်အားတွေ ပိုရလာတယ် မဟုတ်လား)
အကျိုးအမြတ် ကို လိုချင်လို့ လုပ်ကြပေမယ့်....... မူရင်း ဖန်တီးသူကိုတော့ လေးစားသင့်ပါတယ်.... ခုလိုကတော့ ဆိုးလိုက်တာနော်..........
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.... စိတ်အားမလျော့ပါနဲ့ ကိုချန်းရေ.......တစ်နေ့နေ့တော့.......ကိုယ့်ရဲ့ အားထုတ်မှုကို.........အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိရောက်အောင် အသိအမှတ် ပြုခံရမှာပါ.....
install လုပ်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ installer ကို ပြန် run ပြီး အဲ့ဒိက နေ remove/ uninstall ကနေတခေါက်လောက်ပြန်စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်..
အဲ့ဒါမှမရရင်တော့ အင်တာနက်ကနေ software remover တခုခုဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး စမ်းသပ်တာမျိုးလည်း သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေဒေါင်းရင်းနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဟာတွေပါပါလာတတ်ပါတယ်.. နောက်တမျိုးကတော့ နောက်ဆုံးနည်းပါ.. manual လိုက်ရှာဖျက်ပြီး ၊ window logo+R ကိုနှိပ် (vista မှာ run ရှာရခက်နေမှာစိုးလို့) ပြီးရင် regedit ရိုက်ပြီး enterနှိပ် ၊ continue ကို ထပ်နှိပ် HKEY_LOCAL_MACHINE&gt;&gt;SOFTWARE&gt;&gt;AUTODESK 09&gt;&gt; အဲ့ဒိက REGISTRY တွေကိုပါဖျက်ပစ်လိုက် ၇င်တော့ Uninstall လုပ်တာနဲ့ တူတူဖြစ်သွားစေမှာပါ... registry ကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပြန်လည် install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်....
ချန်းချန်းအခွေကို ၀ယ်ယူပြီးလေ့လာသူအနေနဲ့ ၄င်းရဲ့ ခင်မင်သူတွေကို ကော်ပီကူး ပြီး ရှဲးတာမျိုးကို လက်ခံပေမယ့် ခုလို့ ကာဗာပြောင်း ကြော်ငြာတင်ပြီး စီးပွားရေးဆန်ဆန် ရိုက်စားလုပ်တာမျိုးကျတော့ ချန်းချန်း ခံစားရပါတယ်...
တော်တော်ပဲ့တဲ့သူလို့ ပြောရမယ်ဗျာ..အနည်းဆုံး ကိုချန်းဆီကို အရင်ခွင့်တောင်းရင် ကိုချန်းလည်း ကြော်ငြာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုချန်းရဲ့  ကျေးဇူးတင်စကားပြောတာတောင်ခံနိုင်ရပါသေးတယ်..အခုလိုကြီးလုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ..ကိုချန်းဘယ်လိုခံစားရတယ် ဆိုတာ နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကိုချန်းအသံက ငှက်ဆိုးထိုးသံမဟုတ်ပါဘူး..very cool ပါဗျ.. :D
&quot;Acad 2009 install is forbidden by the System Administrator is appeared.&quot; ဆိုတဲ့ အလားတူproblem မျိုး
ကို autodesk discussion group မှာ ဆွေးနွေးတာတွေ့ပါတယ်။....ကျွန်တော်တော့သေချာမဖြစ်ဘူးတော့....
ဒါက ဒုတိယတစ်ခုပါ ...http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&amp;id=9598552&amp;linkID=9240617 :)
i want AUTO CAD software.
so please upload the files for me or
please show me where can down load software files.
MON Kg lay.
ဒီ link ကိုသွားပါနော် ....http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,2759.45.html
ကျွန်တော်၏ အခက်အခဲများအား ကူညီဖြေရှင်းပေးထားသော... (ကို) ချန်းချန်း နှင့် (ကို) papagyi တို့အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ထိုမေးခွန်းမေးခဲ့စဉ်က ကျွန်တော်သုံးခဲ့သော ဆိုင်ရှိ ကွန်ပျူတာတွင် မြန်မာ စာ ဖောင့် မရှိပါသဖြင့်... ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသေချာမေးမြန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ယခုပြန်စာများအရ ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ နေသော အခက်အခဲများ ကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်း....
ကျွန်မ ရဲ့ auto CAD 2006 မှာ layer သုံးလို့မရ လို့ကူညီပါဦး
layer ကိုဘယ်လိုသုံးမရတာလဲ နော်။ ..မသုံးတတ်တာလား? toolbar မရှိတာလား?
command က unknown ဖြစ်တာလား ? မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ :) :)
I find it difficult to put dimensions scale on the layout. Would you kind enough to explain me? Thanksalot! I will be waiting for you!
Layout မှာ Dimension ဆွဲချင်တယ်ထင်လို့ဖြေပေးလိုက်တာပါ။
Format &gt; Dimension Style &gt; Modify ကကိုသွားပြီး Modify Dimension Style က Fit ကိုသွားပါ။
အဲဒီမှာ Use overall scale of: ဆိုတာကို Adjust လုပ်ရင်ရပါပြီ။ Layout အတွက်ဆိုရင် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကို 1 ကနေစထားပါ။
Model space အတွက်ဆိုရင်တော့ setting လုပ်ပေးရမဲတန်ဖိုးကကြီးတတ်ပါတယ်။ Drawing Limit အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
သတိပြုရမှာက ဒီ setting ကိုသုံးရင် Arrow Size, Text size,...စတာတွေကို Default အတိုင်းထားပါ။
ချန်းချန်းတို့ပြောနိုင်တာထက် ပိုပြည့်စုံစေချင်တာကြောင့် ဆရာဦးရောဘတ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၇ မျက်နှာကို တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဂရုစိုက်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲအတွက် အဖြေ ရလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည့်ပါတယ်...
ူlayout မှာ dimesion တပ်သုံးနေရင် ဂရုပြုစေချင်တာက dimension associate ကို မဖျက်မိစေဖို့နဲ့... model ထဲက object ကိုထိထိမိမိsnap ထိပြီး dimension ကောက်ဖို့ပါပဲ... တကယ်လို့ model မှာ stretch လုပ်တာ trim လုပ်တာ move လုပ်တာတွေအတွက် paperspace ထဲက dimension တွေကို မျက်ကွယ်မပြုမိစေဖို့ပါပဲ....
ဒီမှာ ဒေါင်းပါနော် (http://www.mediafire.com/download.php?jutknmznvdl)
Layout မှာ Annotative Dimension နဲ့ တပ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ထို့အတူ...Annotative text....acad 2009 မှာ ပါပါတယ်။..acad 2008 မှာစပါမယ်ထင်ပါတယ်။...
ဒီ link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ http://www.ellenfinkelstein.com/AutoCAD_tips_automate_annotation_2008.html
အခက်အခဲလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အော်တိုကတ် 2008 ကို ပထမတခါတင်တာရပါတယ်။သူက ရက်30ပဲခွင့်ပြုတယ်။ရက် 30 လဲပြည့်ရော သုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုနောက်ထပ်တင်တာ keygen တောင်းတယ်။အဲဒီ keygen ကလုံးဝဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။keygen က လေးထောင့်တုန်းလေးတွေပဲနေတယ်။ဘယ်ဖောင့်နဲ့ဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။သိရင်ဖြေပေးကြပါ။
008 ကီးဂျန်လား တင်ပေးမယ်လေ..
အေကက်ကို ဖွင့် .. အက်တီဗိုက်တောင်းနေတဲ့ နေရာကျမှ ကီးဂျန်ကို ဖွင့်
ကုဒ်ကို ထည့်... အက်တီဗေးရှင်းကုဒ်ကိုယူ။။
ကျွန်တော်က A.G.T.I&lt; mp&gt; နဲ့ကျောက်းပြီးထားတာပါ။ Auto CAD တော့တက်ထားပါတယ်။ သင်တန်းမှာ 2D နဲ့ 3D နည်းနည်း ပဲ သင်ပါတယ်။ Auto CAD နဲ့ နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့ Auto CAD နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသင်တန်းမျိုးကို ဆက်တက်သင့်သလဲဆိုတာ အကြံပေးကြပါလို့ အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ။
ဒါလေးက ကျွန်တော့် mail ထဲရောက်လာတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ရဲ့  SG က interview question လေးပါ...
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သေချာနားမလည်ဘူး...
ကျွန်တော့် အမြင်တော့ layout ထဲမှာ page setup ကို 1:1 နဲ့ လုပ်ပြီး
scale factor 1:100 နဲ့ဆိုရပြီလေ...SG က လုပ်ငန်းသဘောကိုတော့ သေချာမသိတော့
ဘာကို လိုချင်မှန်းသေချာမသိဘူးဖြစ်နေလို့ ...လုပ်ကြပါဦး...Ko zaw ,Ko chan ,Kpz ,phyo...all member! :)
I have some AutoCAD problem that is i meet interview . They give me Drawing with scale 1:100 and they needapart of drawing with 1:100 scale . if i set 1:100 scale, I must use scale and exaggerate it so change dimension.They said I setanew paper with 1:100 scale . but i can&#039;t . Pls solve this problem. Thanks you !
ဒီအထဲမှာ ၀ါအနုဆုံးက ကျနော်ဖြစ်နေတော့.. ဘယ်သူများ ပြန်ဖြေမလဲကြည့်နေတာ... အင်း.. ဘယ်သူမှ မမြင်မိလိုက်ကြဘူးထင်တယ်ဗျာ..
ဒီတော့.. အားလုံး သတိထားမိသွားအောင်... ကျနော်ကပဲ.. refresh လုပ်ပေးလိုက်မယ်..
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကိုပဲ.. ရမ်းတုတ်ပေးမယ်.. ;D
သူရေးထားတာကို ကျနော်လည်း မရှင်းဘူး..
ပထမဆုံး ကျနော်သိချင်တာက ..
သူ့ ကို ပေးတဲ့ Drawing က Print လုပ်ထားပြီးသား Drawing လား..ဒါမှမဟုတ် Soft copy ကိုပဲ ပေးပြီး.. scale set up ပြန်လိုက်ခိုင်းတာလား .. ::)
တကယ်လို့Print ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ဆိုရင်တော့..
သိပ်မခက်ဘူးထင်ပါတယ်... ကို papagyi အထက်မှာပြောသလို လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ... ဟိုမှာက.. ပေလက်မ သုံးတယ်.. ဒီမှာက. mm နဲ့m သုံးတယ် ( mm နဲ့m သုံးပြီး ပုံထုတ်တာက ပိုတောင် လွယ်သေးတယ် )
.. အဲဒီပုံကို ဆွဲထားတဲ့ Scale က A1 ဒါမှမဟုတ်.. A0 paper size ပေါ်မှာ set up လုပ်ထားပြီး..
ပုံထုတ်ထားတဲ့အခါ... A3 paper နဲ့ ထုတ်ထားရင်..
နောက်ပြီး သူလိုချင်တာကလည်း.. Drawing တစ်ခုလုံး မဟုတ်ဘူး.. အဲဒီထဲကမှ တစ်ခုလေးပဲဆိုရင်.. သေချာသလောက်ရှိနေပြီ..
ပထမဆုံး.. သူ့ ကိုပေးထားတဲ့ Drawing ထဲက Scale ကို ကြည့်ပြီး.. ဘယ် paper size ပေါ်မှာ scale ချိန်ပြီး ထုတ်ထားတာလည်းဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုပါမယ်..
အထက်က ကျနော်ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်....
ပုံကို ဆွဲပြီးတာနဲ့ .. layout မှာ A3 ဆိုဒ်ကို setting လုပ်ပြီး drawing ကို scale ချိန်လိုက်ပါ.. Ok သွားမယ် ထင်ပါတယ်...
အောက်က ပုံမှာက... plan ပုံလေးတစ်ခုပါ.. သူ့ စကေး က ၁း၅၀ ပါ .. ဒါပေမယ့်.. A1 paper ပေါ်မှာ setting လုပ်ထားတာပါ..
အဲဒီအထဲကမှ အနီ ၀ိုင်းထားတဲ့ နေရာလေးကိုပဲ.. ၁း၅၀ Scale နဲ့ပုံထုတ်ကြည့်ရအောင်ပါ..
ဒီ ဒုတိယပုံ ကတော့ အပေါ်က ပုံမှာ အနီဝိုင်းထားတဲ့ နေရာလေးကိုပဲ ၁း၅၀ နဲ့ ပဲ ပုံထုတ်ပါမယ်.. ဒါပေမယ့် A3 paper ပေါ်မှာ Set up လုပ်ပါမယ်..
ဒါဆိုရင်တော့.. ဒီပြဿနာ ပြေလည်သွားမှာပါ..
အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ..company က ထုတ်ပေးတဲ့ပုံက.. Soft copy ဆိုရင်..
Model ပေါ်မှာပဲ Drawing ကို scale ချိန် ပုံထုတ်မလား..ဒါမှမဟုတ် .. layout ပေါ်မှာပဲ လုပ်မလား ..
ဘယ် paper size နဲ့ပုံထုတ်မလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး..စဉ်းစားရပါမယ်..
ဒါက ဒုတိယ ပြဿနာပဲ ထားပါဦးဗျာ.. ပထမ ဖြေရှင်းထားတာကိုပဲ.. ဟုတ်မဟုတ် ၀ိုင်း စဉ်းစားပေးကြပါဦးနော့..
မရှင်းရင်လည်း.. ထပ်မေးပါ.. ကျနော်နားလည်သလို ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်.. မှားနေရင်လည်း.. ထောက်ပြပါဗျာ..
ကျမလည်း သူမေးတာကို နားမလည်လို့ ဘာဖြေရမှန်းမသိတာ
ဒုတိယ case လို soft copy ဆိုလဲ...layout မှာပဲ..အကောင်းဆုံးပါ။....
Model မှာပုံ ထုတ်တယ်ဆိုတာ..acad .Release.14 မှာနောက်ဆုံးပါ။...
3D ပုံဆွဲပြီးရင် ပုံထုတ်ဖို့ page set up မှာချိန်ပါတယ်။ layer တွေမှာ ကာလာနဲ့ ဆွဲပြီး ပုံထုတ်ရင်
black &amp; white ပဲဖြစ်အောင် monochrome ထားချင်တယ်။ Shaded viewport options မှာ
လိုချင်တဲ့ (ဥပမာ wireframe, shade) တို့ကို ပြောင်းချင်ပေမဲ့ shade plot box က active မဖြစ်နေတော့
ဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ 2D မှာ monochrome ပြောင်းတာ အဆင်ပြေပေမဲ့
3D မှာမရဘူးဖြစ်နေလို့။ ပြီးတော့ shade plot ကလည်း layout တစ်ခုစီမှာ တမျိူးစီထားဖို့
shade plot box က active မဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
နေညို့ စက်ကို window အသစ်တင်လိုက်ပြီး software တွေ အသစ်ပြန်တယ်လိုက်တာနဲ့
ခုနက ပြောတာတွေလုပ်မရတော့ဘူး။ Options ကနေသွားပြီ ထင်တာတွေ ပြောင်းကြည့်ပြန်တော့လည်း
အဆင်မပြေလို့။ Print ထုတ်ရင် ဒုက္ခများလို့ပါ။ ပြီးတော့ acad ကနေ pdf ပြောင်းတဲ့အခါ
ပြောင်းလိုက်တဲ့ ပုံရဲ့ လိုင်းနဲ့ စာလုံးတွေကို အထူအရမ်းများနေလို့။ normal ပဲထားတာကို။
ပြောပေးကြပါဦးနော်။မေးတာများကုန်ပြီ။ ;D ;D
နေညိုပြောတာလေးတွေက ..သုံးတဲ့ version သိရင်ပိုကောင်းမယ်..
plot အတွက် ..screen shot လေးတွေပါတင်ပေးပါလားနော်.. :)
acad ကနေ pdf ပြောင်းတဲ့အခါ
မေးတာမေး.... ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ သိရမှာ....
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခု သိချင်လို့.... ACAD ကနေ pdf... နောက်.. pdf ကနေ ACAD ပြန်ပြောင်းတဲ့
procedure လေး ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ....???
ကိုယ်လုပ်တိုင်း.... error တွေ ပေါ်နေလို့.... format ကျကျ သိချင်လို့ ရှင်းပြကြပါဦးနော်
2008 ပါ ကိုပါပါ။ screen shot တင်ပေးဖို့ ကော်ကော်ကောင်းမှရမှာမို့ တင်ပေးမယ်နော်။
ဂျွန်မိုး ရေ....PDF to ACAD ကိုပြောင်းလို့ရတာတော့ အမ မသိဘူး။
Acad to PDF ကတော့ အဆင့်ဆင့်ဒီလိုလေးလုပ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
1) Print ထုတ်ဖို့ Layout ကိုသွားပါမယ်။
2) Page set up manager မှာ Layout ကို Modify လုပ်ပါမယ်။ Modify ကိုသွားပါ။
3) Printer/Plotter ဆိုတဲ့ နေရာမှာ DWG to PDF.pc3 ဆိုတာကို ရွေးပါ။
4) Plot style table မှာ ကိုယ်ထုတ်ချင်တဲ့ ပုံစံကိုရွေးပါ။ ဥပမာ အဖြူအမည်းပဲဆိုရင် monochrome ပေါ့။
5) ကျန်တဲ့ နေရာ Paper Size, Plot area စတဲ့နေရာတွေကတော့ ရိုးရိုး Print ထုတ်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
6) ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါ။
7) Print command ပေးပါ။ Plot box မှာ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ setting အတိုင်းပေါ်နေမှာပါ။
8) OK ပေးလိုက်ပါ။ Save box ကျလာမှာပါ။ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းလို့ရပါပြီ။
format ကျမကျတော့ မသိဘူး ညီမလေးရေ။ ;D
PDF2DWG လား... &gt;:( အထူးအသင်းဝင်တွေ..presenter တွေ..
မုန့်ကျွေး... :D ...
မနေညို မေးတဲ့ problem ကိုကျနော်သိသလောက်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်... photo ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..စာမရေးဘူးတော့ နားမလည်မှာစိုးလို့ပါ
(1) viewport ကို select လုပ် Right-Click နှိပ်ပြီး shade plot မှာ Hidden,Wireframe.....etc..ရွေးလိုက်ပါ...
(2) ကာလာအဖြူအမည်းနဲ့လိုချင်ရင်...plot style table မှာ monochrome.ctb ရွေးလိုက်ပါ...(အထူးသဖြင့် .ctb ဖြစ်ရပါမယ်).အခြား file extension ဆိုရင်မရတတ်ပါဘူး......
(3) lineweight default ကိုလည်း အနိမ့်ဆုံး vaule 0.05 mm ကိုရွေးထားလိုက်ပါ...
(4) PDF ဖြစ်သွားပြီးလို့ဖွင့်လိုက်ရင် lineweight တွေထူနေသေးရင် view ထဲက Line Weights ကို click နှိပ်လိုက်ပါ..(Shortcut..Ctrl+5)
အဆင်ပြေပါစေ.. :P :P
Thanksabillion Ko Walar!!
ရသွားပါပြီ။ အဟီးးးးးးးးးးး လိုင်းကိစ္စလည်းရသွားပြီ။ စာလုံးနဲ့ Dimension တွေက ပိုဆိုးတယ်။
အဲဒါမေးဖို့မေ့သွားလို့။ ပြီးတော့ 3D မှာ ဘယ်စာလုံးဖောင့်က အသင့်တော်ဆုံးလဲ မသိဘူးနော်။
ကော်ကော်တိုက်မှာပါ။ ;D ;D
( ဂျွန်မိုးရေ..ကြက်ကြော်ဝယ်ကျွေးမယ်ပြောလိုက် ကိုပါပါကို fine အနေနဲ့။ နေညို ကကော်ကော်တိုက်မှာပေါ့)
ဂျွန်မိုးရေ..ကြက်ကြော်ဝယ်ကျွေးမယ်ပြောလိုက် ကိုပါပါကို fine အနေနဲ့။ နေညို ကကော်ကော်တိုက်မှာပေါ့)
သြော်.... ကိုယ်က သေချာ လိုက်မရှာပဲ.. ထပ်မေးမိတော့လည်း fine အနေနဲ့ ကျွေးရမှာပေါ့ မနေညိုရေ.... :-[
ကျွန်တော် AutoCAD 2010 ကိုသုံးပါတယ်။ 2D ပုံတွေကို print ထုတ်ဖို့အတွက် Print Preview မှာ dotted line တွေက သာမန် line ပုံစံပဲပေါ်နေပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျား ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျား ။
အဲဒါက model space နဲ့...paper space scale မတူတာ ကြောင့်ပါ...
paper space ထဲမှာ အဲဒီ line ကို select လုပ် Ctrl +1 or right click -properties ,properties dialogbox
ပေါ်လာခဲ့ရင် အဲဒီထဲက line type scale ရွေးပြီး....တန်ဖိုးကို ကြီးပြီး..check လိုက်..မရရင်..သေးပြီး check လိုက်
နဲ့ ရပြီဆိုရင်..ma command နဲ့ကျန်တဲ့ လိုချင်တဲ့line တွေ လိုက်ပြောင်းလိုက်ပါ.. :)
LTscale ချိန်ပြီးပြီလား အကိုရေ ...
ရွှေ / ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်မြေပုံတွေကို auto cad နဲ့ ဆွဲတတ်ချင်လို့ ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ။
အခြားသောအသုံးပြုလို့ကောင်းမယ့် Software များရှိရင်လည်းလမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်က အင်္ဂျင်နီယာနှင့်ပတ်သက်တာ ဘာမှ မသိပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ....Autocad နဲ့ ဆွဲမယ်ဆိုရင် အရင် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် drawing paper ပေါ်မှာ အချိုးကျ စနစ်တစ်ကျဆွဲနိုင်တဲ့
concept &amp; skill ရှိဖို့လိုပါမယ် ....အဲလို ရရင်တော့ မခက်ပါဘူး ..autocad နဲ့ litype တွေကို new create လုပ်ပြီး...
လိုအပ်ရင် contour line တန်ဖိုးတွေ ထည့်ပြီး ...ဆွဲချင်းအားဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်..
ကျွန်တော့် knowledge အရဆိုရင် autocad ထက် autocad map software ကို လေ့လာအသုံးပြုသေချင်ပါတယ်..
ဒီမှာလေ့လာပါနော်... :) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=3081357&amp;siteID=123112
ကျွန်တော် autocad 2008 ကိုဆိုင်က ရောင်းတဲ့ခွေကို ၀ယ်ပြိးတင်ထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူက unregister version ဖြစ်နေလို့ပါ ..
အဲဒါကို ..ဘယ်လို ခရက် လုပ်ပြီ. အပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလဲမသိဘူး.... ပြောပေးကြပါလားဗျာ...
ကီးကမ်းလေးပါ ပေးတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့...
တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်လို့ ပါခင်ဗျာ.. အခု ကျနော ရုံးမှာသုံးနေတဲ့ Software က Autocad 2009 LT ပါ.
ပြသနာကတော့ Properties Dialogue Box မကျလာလို့ ပါ။ command မှာ pr လို့ ရိုက်တယ် မပေါ်ပါ။ , Modify ထဲကနေ properties
နှိပ်ပေမဲ့လည်း မပေါ်လာပါဘူး။ နောက်ပြီး Filedia , Cmddia ထဲမှာ 1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး array, hatch box တွေတော့ ကျတယ်။
နောက်ပြီး Ctrl + 1 လည်း နှိပ်ပါသေးတယ် မပေါ်ပါ :(
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်.
Attached file လေးကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါ။
Installation Guide ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကီးဂျန်ကိုမဖွင့်ခင်မှာ Anti-Virus Program ကို Disable လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။
ဘယ်အပိုင်းကို အ ရင်သင် သင့်ပါသလည်း
နီးစပ်ရာ သင်တန်းသာ အရင်ပြေးတက်လိုက်ပါ..
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,2318.0.html ဒီမှာ ဖတ်ပါ.. :)
scale အကြောင်းသေချာ သိချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကယ်ကြပါဦး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာပုံထုထ်တာအဆင်မပြေလို့ပါ။
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ အားလုံးမင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ တစ်ခြားကွန်ပျူတာက harddisk ကိုတပ်ပြီး data backup လုပ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချို့ဖိုင်တွေ ဟာ encrypt လုပ်ထားတဲ့အတွက်
ကျွန်တော် data တွေကို ကူးရာမှာ ကူးလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သိသလောက် နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး လုပ်ကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်ပြီး တွေ့သလောက်လုပ်ကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ decrypt လုပ်နည်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြကြပါအုံးခင်ဗျာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..... ကိုထွန်းရေ........ တကယ်ပြောတာပါဗျာ...ရင်ထဲကိုအခုမှပေါ့သွားသလိုပဲ...
သတိထားရ :e :e :O :O :Oမှာက antivirus ကို disable လုပ်ဖို့ပဲဗျာ...အင်တာနက် ရှိသူများ.. connection ပိတ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်...
အခုမှသိလို့ ၀င်မျှလိုက်တာ :4: :4: :4: :4:
LT ဆိုတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ...ကျွန်တော်လဲ မသူံးဘူးတော့..ပုံမှန်ကတော့ ရရမှာပါ...
လိုချင်တဲ့ object ကို select လုပ်ပြီး right click ...properties ကို select လုပ်ရင်ကော..? :)
Swimming pool နဲ့ပတ်သတ် ပြီး drawing နမူ နာ လေး တွေ ရှိ ရင် မျှဝေပေး စေ လို ပါ တယ် ခင်ဗျာ..။ နောက်ပြီး ဘယ် လို အချက် တွေ ကို မူတည်ပြီး ဆွဲတယ် ဆို တာလည်း အတွေ့အကြုံ ရှိသူ များ မှ ပြော ပေးကြပါဦး ..။ M &amp; E နဲ့ ပတ် သတ် တာ ဖြစ် ပေ မယ့် ..အော်တိုကတ် နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခု လော လော ဆယ် အခက်အခဲ ကြုံ နေ တာ မို့ လို့ ဒီ tread မှာ ၀င်မေးရ တာ ကို နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ..။ မျှဝေလာ မယ့် အကူအညီ များ ကို စောင့် မျှော် နေ ပါ့ မယ်..။ ကျေး ဖူး တင်ပါ တယ်.။
UCS ကို front or side view တစ်ခုခုမှာ ထားပြိး circle ဆွဲလိုက်ပါတယ် ။ပြိးတော့ အဲဒီစက်ဝိုင်းရဲ့ centre ကနေပြိး line တစ်ခုကို
ortho on ပြိးတော့ vertical အတိုင်းဆွဲလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒိ စက်ဝိုင်းနဲံ မျဉ်းကြောင်းကို fillet လုပ်ကြည့်တော့ မရလို့ပါ။ ညိမဆွဲတဲ့ပုံတိုင်း
မှာ ARC နဲ့ LINE တွေကို fillet လုပ်တိုင်း line က vertical အတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမှလုပ်မရလို့ပါ။ အဲဒိပုံကိုပဲ line ကို horizontal အတိုင်း
ပြန်ထားပြိးတော့ fillet လုပ်တော့ရပါတယ်။ ညိမဆွဲတာ ဘယ်နားမှားနေသလဲဆိုတာ ကေျးဇူးပြုပြိးရှင်းပြပေးပါနော်။
Object ( circle and line) ပြင်ညီ တစ်ခုတည်းမှာရှိနေတာ မဟုတ်ရင် Fillet လုပ်လို့မရနိုင်ပါ။
ညီမ ပြောသလိုဆွဲကြည့်ပါ။ ပြီးရင် 3D view ကြည့် ကြည့်ပါ။ Circle နဲ့ line က တစ်ထပ်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။
ရုံးမှာဖြစ်နေလို့ပါ။ အိမ်မှာဆိုရင် ပုံလေးနဲ့ သေချာရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ညိမ 3D view ကနေကြည့် ကြည့်ပါတယ် ။တစ်ထပ်တည်းကျတယ် အကိုရဲ့ ။ orbit လည်းလှည့်ကြည့်တယ်။ view မျိုးစုံလည်းလှည့်ကြည့်တယ်။ အဲဒိပုံကိုဘဲrotate လုပ်ပြိးတော့ fillet လုပ်တော့ဘာလို့ရတာလဲအကိုရေ။
Sorry ညီမရေ မရဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်။ ညီမ မှားတာမဟုတ်လောက်ဘူး။
Vertical line တစ်ခုပဲမရတာ။ အဲဒီလိုင်းကိုပဲ ၁ ဒီဂရီလောက်ကြိုက်တဲ့ဖက် ကို Rotate လုပ်လိုက်ရင်တော့ Fillet လုပ်လို့ရတယ်။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိတော့ဘူး။ ကြံကြံဖန်ဖန် လည်းရှာတွေ့တတ်ပနော်။ :ok
အကိုတို့ AutoCAD ဆွဲလာတာ ကြာလှပေါ့၊ အဲဒါတောင်မှ သတိမထားမိဘူး။ :harhar
ညိမလည်း ဆွဲရင်းနဲ့မှ မရလို့ မေးကြည့်တာပါ ။ အကိုတို့သိရင်ညိမကိုပြန်ရှင်းပြပေးပါဥိးနော်။အခုလိုကူညိပြောပြပေးတာကျေးဇူးပါ။
မရောက်တာကြာလို့ပြန်ဖြေပေးထားတာကို အခုမှ တွေ့ မိတယ်။ အဲလို Select လုပ်ပေမဲ့ မရပါဘူး ကိုပါကြီး ရေ။ အဲဒါနဲ့Reinstall လုပ်လိုက်တယ်။ အခုတော့ ရသွားပြီး :)
Attribute Block ကိုဘယ်လို Explode လုပ် ရမလဲဗျာ
Explode ရော Burst ရော မရဘူးဗျ
Cannot explode that block.
ကျွန်တော်က ဒီအပိုင်းမှာ သိပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကိုတော့ အောက်ကနည်းလေးအတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါဦး။
တကယ်လို့ သာ မူရင်း block လုပ်ထားတဲ့သူက
အောက်က အတိုင်း ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်
အဲဒါကို ဖျက်မိတဲ့အခါ အခုလိုပဲ
explode (or)burst လုပ်လို့ မရတာမျိုးဖြစ်လာမှာပါ
အခု block command ကို run လိုက်ပါ
ပြီးရင် အပေၞက box ပေၞလာတဲ့အခါ ဖျက်လိုတဲ့ block name ကို select လုပ်ပြီး allow exploding box ကို check လိုပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် ok လုပ်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် အဲဒီ block ကို explode လုပ်လို့ ရပါပြီ
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ကအခုမှစလေ့လာနေတာ လေ့ကျင့်ဖို့ drawin မရှိလို့ ၊ အရင်က Quick Cad ကစာအုပ်နဲ့လေ့ကျင့်နေတာ ၊ :e အခုပျောက်သွားလို့။ ဖြစ်နိုင်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ပုံလေးတွေမျှပေးပါဦးခင်ဗျ။
AutoCAD 2008 မှာဗျာ..
ပြဿနာလေးတစ်ခု ရှိနေလို့ 
scalelistedit command ကို သုံးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ..menu &gt;format &gt; scalelist ကနေ ၀င်ကြည့်တော့လည်း အတူတူပဲ menu box တစ်ခုတက်လာပြီး unhandle exception has occurred in component inyou application.If you click Continue,the application will ignore this error and attempt to continue. ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရဘူး..
variable တွေကို check ကြည့်တော့လည်း ok နေတယ်....
ဘာလို့scalelist edit လုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့Drawing File မှာ တခြားဖိုင်ကနေ Block တစ်ခု ကူးယူလိုက်ရင်..ကူယူလိုက်တဲ့ မူရင်းဖိုင်ကနေ
XREF block တွေ XREF scale တွေ ( ဥပမာ &quot;1:20_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF&quot;.စသည်ဖြင့် ) ဆယ်ဂဏန်းကနေ ရာဂဏန်း အရေအတွက်အထိ ပါလာပြီး
ဒီဘက်က ဖိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အရမ်းကို နှေးနေတော့တာပါပဲဗျာ.. :e
အဲဒါဗျာ.. ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး...
AutoCAD 2009 မှာကတော့ option မှာ &quot;hide Xref Scales&quot; ဆိုတဲ့ ဟာလေး ပါလာပြီးတော့ အဲဒါကို select လုပ်လိုက်တာနဲ့အထက်က ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားရော..
ဒီ 2008 မှာကတော့ ScriptPro လို program တစ်ခုခု သုံးရင်တော့ ရမယ်လို့ ထင်တာပါပဲ..တစ်ခါမှလည်း မစမ်းကြည့်ဘူးသလို အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို မသိလို့သိတဲ့သူများ..
ကိုဖြိုးရေ...ကျွန်တော် autocad website link ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဒါလေးရေးပေးဘူးတယ်ဗျ..
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&amp;id=2334435&amp;linkID=9240618 ဒီ link မှာ autocad version တွေအားလုံး
အတွက် software problems ဖြေ၇ှင်းပေး တာတွေ service part တွေ tutorials တွေ .....autocad နဲ.ပတ် သက်တာတွေကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။
အဲဒီမှာ autocad sp1 down ပြီး install လုပ်ကြည့်ပါလား...နောက် ဖတ်ကြည့်ပါဦး..အဲဒီ link မှာ..autocad version အလိုက်သက်သက်စီခွဲထားပါတယ်.. :)
အင်းကျွန်တော့်ကိုကူညီကြပါ..ဘာလဲဆိုတော့Office 2007လေးကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေလို့..အင်းအဲsoftware တင်နည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..အဲဒါကိုသုံးနည်းလေးနည်းနည်းလောက်အသေးစိတ်ဖေါ်ပြပေးစေချင်တယ်...ကျေးဇူးနော်.....
ဟုတ်ကဲ့ပါ...ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်မှာက autocad အကြောင်းလေးတွေ သပ်သပ်ခွဲပြီးဆွေးနွေးဖို့ထားတာပါ..
office လိုမျိုးတွေက ...ဒီနေရာလေးကနေ...http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,70.0.html
ကိုယ်အဆင်ပြေမယ့် software ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မေးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ... :)
Auto Cad 3D ဆွဲတာ ခေါင်မိုးမဆွဲတတ်တော့လို့ကူညီပါအုံးနော်...
:&#039;( :e :7:
ဘယ်လိုမရတာလဲ.. :? solid နဲ့ဆွဲတာလား..surface နဲ့ဆွဲတာလား..ဘယ် versionနဲ့လဲ..
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ခေါင်မိုးက... :? :? :O
အဲမဆွဲတတ်လို့ ဆွဲဖို့သင်ခိုင်းတာဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ..tutorial တစ်ခုအနေနဲ့ကိုရေးရမှာ..
အဲလိုဆိုရင်တော့ လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့..ဦးလေးရေ(ထွန်းအောင်ကျော်)..တန်းလန်းမဖြစ်ရင် tutorial လုပ်ပေးပါလား.. :)
video tutorial များလား။
ဘယ်လိုေ၇းရမှန်းမသိဘူးဗျ။ :? :? :?
အော်တိုကတ် ဗားရှင်း 2009 မှာ Layiso လုပ်ရင် ကျန်တဲ့ Layer က မပျောက်ပဲ မှိန်၊ လော့ဒ် ဖြစ်နေတယ်။ အရင်လို ကိုယ်လိုချင်တာပဲ ပေါ်ပီး အားလုံးပျောက်အောင် ဘယ်လို နည်းလမ်းများရှိလဲခင်ဗျာ
အဲဒါက ပိုကောင်းလာတဲ့သဘောပါ..layiso ..enter ..ပြီးရင်ဘာမှမလုပ်ပဲ commandline က စာဖတ်ပါ...setting ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်..
အဲတော့ S enter ရိုက်ပါ...နောက် off mode အတွက် o ဒါမမဟုတ် off ရိူက်လိုက်ပါ။..default အနေနဲ့ (lock &amp; fade) ကို on ထားလို့ပါ။..
ကျွန်တော်တော့ Attibute Block ကိုပြင်ချင်ရင် Attribute Manager ကိုသုံးတယ် အတော်အသုံးတည့်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါ ကျွန်တော်က သာမာန် user အဆင့်လောက်ဆိုတော့ ၀င်ဆွေးနွေးတာများ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ။
scalelistedit command ကို သုံးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ..menu &gt;format &gt; scalelist ကနေ ၀င်ကြည့်တော့လည်း အတူတူပဲ menu box တစ်ခုတက်လာပြီး unhandle exception has occurred in component inyou application.If you click Continue,the application will ignore this error and attempt to continue. ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရဘူး..
variable တွေကို check ကြည့်တော့လည်း ok နေတယ်....
ဘာလို့scalelist edit လုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့Drawing File မှာ တခြားဖိုင်ကနေ Block တစ်ခု ကူးယူလိုက်ရင်..ကူယူလိုက်တဲ့ မူရင်းဖိုင်ကနေ
XREF block တွေ XREF scale တွေ ( ဥပမာ &quot;1:20_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF&quot;.စသည်ဖြင့် ) ဆယ်ဂဏန်းကနေ ရာဂဏန်း အရေအတွက်အထိ ပါလာပြီး
အဲဒါဗျာ.. ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး...
ဒီ 2008 မှာကတော့ ScriptPro လို program တစ်ခုခု သုံးရင်တော့ ရမယ်လို့ ထင်တာပါပဲ..တစ်ခါမှလည်း မစမ်းကြည့်ဘူးသလို အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို မသိလို့သိတဲ့သူများ..
Command: -scalelistedit &lt;enter&gt;) (- က dialog box မဖွင့်ပဲရှင်းတာ။ ပြဿနာက scalelistတွေ များလို့ Dialog Boxမပွင့်နိုင်တာ ထင်တာပဲ။)
Enter option: R &lt;enter&gt; (Reset)
Enter option:E &lt;enter&gt; (Exit)
အဲဒါဆိုရင် ဒီ file မှာ မလိုတဲ့ scalelist တွေရှင်းသွားရော။
တခြား file က copy ကူးရင်လဲ မကူးခင် အထက်ပါ procedure ကိုအရင်လုပ်ပြီးမှ copy ကူးပေါ့။
ကျွန်တော်တင်ပြတာက Temporary အတွက် အလွယ်ရှင်းနည်းပေါ့။
နောက်တစ်နည်းက LISP ရေးပြီးရှင်းတာ။ သိပ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ် လိုမယ်ထင်လို့ ကြိုလုပ်ထားတဲ့ custom scalelistတွေပါ ကုန်ရော။
အခုတော့ 2010သုံးနေရတာမို့ အဲဒီပြဿနာကတော့ မတွေ့ရတော့ဘူး။
Anyway ကိုpargi ပြောတဲ့ autodesk site ကိုတော့ဝင်ဖတ်ကြည့်အုံးမယ်။
ကျေးဇူး ကိုpargi ရေ ။
ဒီကောင်လေးကို Notepad ပေါ်တင်ပြီး .lsp နဲ့ save ပြီးအားပေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော် AutoCAD 2010 ကိုသုံးပါတယ်။ 2D ပုံတွေကို print ထုတ်ဖို့အတွက် Print Preview မှာ dotted line တွေက သာမန် line ပုံစံပဲပေါ်နေပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျား ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျား ။
1) ပုံကို Model Space မှာ Print တာလား။ Paper Space မှာလား။
2) ပုံမထုတ်ခင်ကော Dotted Line ကအမှန် Line Type အတိုင်းပေါနေလား။
ကိုpargyi ပြောသလိုရှင်းရင်ရတာမှန်ပေမယ့် Auto CAD 2009 မှာထင်တယ်။
Psltscale variable အပြင် Msltscale variable ပါတိုးလာလို့ပါ။
Problem ကိုဒီ့ထက်ပိုပြီး သိရမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတိကျတဲ့ Solution ကိုပေးနိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော် AUTO CAD 2009သုံးပါတယ်...အဲ့မှာ rendering လုပ်ရင်errorဆိုပြီးပေါ်လာပြီး ပိတ်ပိတ်သွားပါတယ်...ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးရှင်းပါပြေပါအုံးခင်ဗျာ...
်file new ဖွင့်ပြီး..အသစ်စမ်းကြည့်ပါဦး..ရရင် အဲဒီ file က ပြဿနာတက်တာ..
မရရင်တော့ reinstall ပြန်လုပ်ရမယ် :)
့ကို pargyi ရေ တစ်ခုလောက်ကူညီပါဦး ။ AutoCAD 2010 မှာ Render crop ပဲလုပ်လုပ် ၊Render ပဲလုပ်လုပ် ၊ zoom ဆွဲပြီး လုပ်လိုက်ရင် ဘာမှကိုမမြင်ရတော့ဘူးဗျာ။ဘာတွေလုပ်ရမလဲ၊ ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ
ဘယ်လို zoom ဆွဲလို့ဖြစ်တာလဲ..သိပ်မရှင်းလို့ပါ...
rr ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်မပေါ်တာလား...ပေါ်ပြီး..zoom ဆွဲတာကိုပြောတာလား..
ဒီလို ကိုpargyi ရေ။ object တစ်ခုကိုခပ်ဝေးဝေးကနေပြီး render လုပ်ရင်ပေါ်တယ်၊ အဲဒီထဲကမှ အနီးကပ်ပြီး ကြည့်ချင်တဲ့ portion ကို zoom in လုပ်ပြီး render လုပ်ကြည့်ရင် background ကိုပဲ display လုပ်တော့တယ်
ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်တာတော့ ဝေးဝေးကလုပ်ပြီး..နီးနီးလုပ်လဲရတယ်ဗျ..
ပြန်ပိတ်ပြီး..file new မှာ တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါလား..
အဲလိုမှမရရင် camera နဲ့ ဖဖ်းပြီး လုပ်ကြည့်ပါဦး.. :)
ကို pargyi ရေ မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော့် ဆီမှာ file တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာဗျ။
ဒါဆို autocad install လုပ်ထားတဲ့ folder အောက်က sample folder ထဲက file တစ်ဖိုင်လောက် စမ်းကြည့်လိုက်...ဥပမာ visualization_-_condominium_with_skylight.dwg
အဲဒီ file ကိုဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက် ရရင်တော့ setting တစ်ခုခုပဲ..အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုတင်မျိုးမရတဲ့ file တစ်ဖိုင်လောက် ဒီမှာတင်ပေး ကျွန်တော်စမ်းပေးမယ်
မရခဲ့ရင်တော့ autocad ပြန် install လုပ်ရမယ်ထင်တယ်... :)
autoCAD နဲ့ Excel တွဲသုံးတက်ပါသလား လို့ အမေးခံရလို့ပါ :O။ အဲဒါ auto CAD ထဲကို excel sheet ထည့်သုံးတာလား ။
Excel sheet ထဲကို autoCAD Drawing ထည့်သုံးတာလား သိချင်ပါတယ်။ နားလည်သူများ ရှင်းပြပေး ကြပါဦး :?
autoCAD နဲ့ Excel တွဲသုံးတက်ပါသလား လို့ အမေးခံရလို့ပါ :O။ အဲဒါ auto CAD ထဲကို excel sheet ထည့်သုံးတာလား ။
Excel sheet ထဲကို autoCAD Drawing ထည့်သုံးတာလား သိချင်ပါတယ်။ နားလည်သူများ ရှင်းပြပေး ကြပါဦး :?
Excel File မှာ အလွယ်တကူ ရိုက်လို့ရတဲ့ စာရင်းတွေကို copy လုပ်ပြီး AutoCAD ထဲ မှာ Paste/ Paste Special နဲ့ ပြန်ပြီး လုပ်တာမျိုး တင် မဟုတ်ဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ ပါလာတဲ့ Data Extraction / Data Links ဆိုတဲ့ Function တွေကို မေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
Excel က ဒေတာကို AutoCAD မှာ ပြန်တင်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. AutoCAD ကဒေတာကို Excel sheet ထဲပြန်ထုတ်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၂ မျိုးလုံး လုပ်လို့ ရပါတယ်..
ဥပမာ Pile ထောင်ချီပြီး ရိုက်ရမဲ့ GA တခုမှာ Coordinate တွေကို table လေး တခုနဲ့ List လုပ်မယ် ဆိုရင် တခုချင်းစီ လိုက်ထောက်ပြီး လိုက်ကြည့်ရမယ် ဆိုရင် Efficient မဖြစ်ပါဘူး... Design Revised လုပ်တိုင်း ဘယ်ဟာ ဘယ်ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာ Manual လုပ်ဖို့ တော်တော် လက်ဝင်ပါတယ်... အဲဒါမျိူးကို လုပ်ဖို့ Data Extraction / Data Links ဆိုတဲ့ Function လေးတွေ 2009 မှာ(လို့ထင်တယ် :) ) စပါလာပါတယ်... ဒီမှာ ထပ်ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်..
အင်းဂလိတ် လိုဂျီးဗျ.. :&#039;( ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
( မြန်မာလိုလေး ရှင်းပြရင်ကောင်းမှာဘဲ ) ညှော်ကြည့်တာ အဟဲ ;)
( မြန်မာလိုလေး ရှင်းပြရင်ကောင်းမှာဘဲ ) ညှော်ကြည့်တာ အဟဲ ;)
စာမဖတ်ချင်လို့ အကြောင်းရှာနေတာနဲ့ အတော်ဘဲ ဖြစ်သွားတယ်... :4:
Data Extract ကို အရင် ပြောပြလိုက်မယ်နော်.. Data Links ကတော့ နောက်မှ ပိုစ့်ထပ်တင်လိုက်မယ်...
ဒီ drawing ထဲမှာ Col ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်... Load table လုပ်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဲဒီ col တွေရဲ့ coordinate ကို list လုပ်ချင်တယ် ဆိုပါတော့...
Column တွေက size မျိူးစုံ orientation မျိူးစုံနဲ့ ရှိနေနိုင်ပါတယ်..
အရင်ဆုံး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒေတာ ရဖို့ Block တွေ နဲ့ စနစ်တကျ ဆွဲထားဖို့ လိုပါတယ်... ဒီ command က Block entity ရဲ့ စက်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဒေတာ ကို extract လုပ်ယူမှာ မို့လို့ပါ...
pull down menu ကနေ Data Extraction ကို ခေါ်လိုက်ပါ..
တဆင့်ချင်း အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဆက်သွားရုံပါဘဲ...
အသစ် စလုပ်မှာ ဆိုတော့ အောက်က အတိုင်း ရွေးလိုက်ပါ... အရင်လုပ်ထားပြီးသား ကို ပြန်ပြီး ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင်လည်း တခြား သင့်တော်ရာကို ရွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
File name တခုပေးပြီး သိမ်းလိုက်ပါ..
ဒီနေရာမှာ တခြား drawing တွေကိုပါ Link လုပ်ပြီး အဲဒီ drawing ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ entity တွေရဲ့ properties တွေကို ထုတ်ယူလို့ ရပါသေးတယ်... ဥပမာ အထပ် 10 စလုံးက column တွေကို drawing 10 file ထဲမှာ ဆွဲထားတယ် ဆိုရင် အခု တခါတည်း data extract လုပ်လိုက်လို့ ရပါတယ်...
ဒီမှာ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ option ရွေးရပါမယ်...
အပေါ်အဆင့်ကနေ next နှိပ်လိုက်ရင် drawing ထဲမှာ တွေ့တဲ့ block တွေကို ထုတ်ပြပါမယ်...
မလိုချင်တာတွေကို uncheck လုပ်ပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ...
အပေါ်အဆင့်မှာလိုဘဲ မလိုချင်တာတွေကို ထပ်ပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ... ဒီအဆင့်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ List ကို သိထားသင့်ပါတယ်... ကျနော် နမူနာ ပြသလို coordinte တွေတင် မကဘဲ အခြား properties တွေလဲ စက်က ထုတ်ပေးလို့ ရပါတယ်... စက်က ဘာထုတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ သိထားမှ ကိုယ် လိုချင်တာတွေ ကို ထုတ်ယူလို့ ရအောင် set up လုပ်ရမှာပါ..
ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် filter လုပ်လို့ရအောင် ညာဘက်က ၀င်းဒိုးမှာ စက်က catagory ခွဲပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်...
လိုချင်တဲ့ column name နဲ့ coordinate တွေ ရပါပြီ... အခြား သင့်တော်သလို လိုအပ်မဲ့ option တွေပါ ရွေးလို့ ရပါသေးတယ်..
table အနေနဲ့ ပုံထဲမှာ လည်း တခါတည်း ရေးလို့ရသလို excel file အနေနဲ့လည်း ထုတ်လို့ပါတယ်... ရလာမဲ့ spread sheet ကို သိမ်းမဲ့ File Path ပေးလိုက်ပါ...
Finish လုပ်ပြီး command အဆုံးသတ်လိုက်ပါ...
သိမ်းထားခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သွားပြန်ကြည့်ရင် excel ဖိုင် တွေ့ရပါမယ်...
လိုချင်တဲ့ Column 456 ခုရဲ့ List ကို ၁ မိနစ် အတွင်း ရပါပြီ... ရလာတဲ့ ဒေတာကို excel ထဲမှာ excel function တွေနဲ့ လိုသလို ထပ်လုပ်လို့ ရပါပြီ....
Download drawing file shall you want to exercise (p/w : MEF)
ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်ရင် ကိုပါကြီး ရဲ့ ဒီပိုစ့်က zip file လေး ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်...
အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အချိန်ပေးပြီး စနစ်တကျ ဝေမျှတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်သလို..
forum အတွက်လဲ အားတက်မိပါတယ်.. :)
AutoCAD Inventor အကြောင်းလေသိချင်လို့ပါ ခင်ဗျာ။
AutoCAD Inventor 2010 Professionals ရဲ့ Serial Number,Product Key လေရှိရင်လည်း share ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဒီဖိုရမ်မှာ AutoCAD အပိုင်းကိုဦးစားပေး ကြည့်ပါတယ်။ AutoCAD Drawing ကိုလည်း တော်တော်လေးဖြစ်ဖြစ်မြောက်ဆွဲတတ်ချင်လို့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လေ့လာနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာက 2D နမူနာပုံလေးတွေကို ပုံတွေနဲ့အတူ အဲဒီပုံတွေကို ဘယ်လိုဆွဲရတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဆင့်ခြင်း သင်ကြားချက်လေးတွေကို တွဲပြီးရနိုင်ရင်လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် စာအုပ်ကနေတစ်ဆင့်လေ့လာတဲ့အခါ အများအားဖြင့် command တွေကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာပဲပါပြီး။ အဲဒီ command တွေသုံးပြီး ပုံတွေကိုတစ်ဆင့်ခြင်း ဆွဲပြထားတာမပါဘူးဗျ။
နမူနာပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါ အခက်အခဲတွေအများ ကြီးတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဖိုရမ်မှ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူ သူငယ်ချင်းများကို အပူကပ်ရတာပါ။
ကျွန်တော်က အခု Singapore မှာမို့ မြန်မာလိုစာအုပ်စာတမ်းတွေလည်း အလွယ်တကူမရနိုင်ပါဘူး။ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ကူညီစေချင်ပါတယ်။ စောင့် မျှော်နေပါမယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ သင်တန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်..အရင်လေ့လာကြည့်ပါဦး
ပြီးတော့ မြန်မာလို autocad စာအုပ်တွေလဲ တင်ထားပါတယ်.. :)
မကြာခင် အခက်အခဲများရှိရင် ဒီကိုလာပါခေါင်းစဉ်အောက်ကို ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ရွေ့  ပါမယ်ခင်ဗျာ.. :)
ကိုပါးကြီးရေ အဲဒီလင့်ကိုသွားတာ အမှားအယွင်းများရှိနေပါသည်လို့ပြနေတယ် ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ဘာများမှားနေလဲမသိဘူး။
သင်တန်းက ပို့စ်တွေကိုဝင်ဖတ်ချင်ရင် Friendly Member ဖြစ်မှဖတ်လို့ရပါတယ်။
Friendly Member ဖြစ်ဖို့ အကျိုးပြုပို့စ် ၁၀ ခု ရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Friendly Member ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင် သင်တန်းကပို့စ်တွေကို ဖတ်လို့ရပါပြီဗျာ။
ကျေးဇူးပါဗျာ အဲလိုဆို ကျွန်တော်ပို့စ်တွေတင်ပါမယ်
ဖိုရမ်က အကိုအမတို့ရေ ကျွန်တော့ကို အောက်မှာ attachment တွဲထားတဲ့ပုံလေးကို ဘယ်လိုဆွဲရတယ်ဆို တာသင်ပေးပါလားဗျာ။ နောက်ကလိုက်ပြီး ဆွဲကြည့်ချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်က စာအုပ်ဖတ်ပြီး command တွေကို အလွတ်ကျက်ရတာထက် ပုံလေးကို ဆွဲတတ်တဲ့သူက ရှေ့ကအရင်ဆွဲပြ ကိုယ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးဆွဲ။ ပြီးမှ နောက်ပုံတွေကို
အရင်ကိုယ့်ဘာသာဆွဲ၊ မရရင် ဖိုရမ်က သိတဲ့သူတွေကိုမေးဆိုတဲ့ ပုံစံလေးကို ပိုအားသန်လို့ပါ။ ကျွန်တော့ကို ကူညီကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့မှလည်း အရေးမစိုက်ကြပါလား အော်....အားကိုးရာမှားပါပေါ့။
ကိုဇေကြီးရေ ..... ဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုတာကို မပြောပြခင် ... တစ်ယောက်က ရှေ့ကပြပေးမယ် ကိုဇေကြီးက လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ အပ်ိုင်းလေးကို စဉ်းစားရအောင်ဗျာ ... .. .
ဒီလိုပါ ... ရှေ့က ပြောပြ နောက်ကလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာက သင်တန်းတွေမှာသင်ပေးတဲ့ပုံစံ မဟုတ်လား ... အခု ကိုဇေကြီးသိချင်တာကို ပိုစ့်ရေးပေးမယ်ဆိုလည်း Command တွေကို ပြန်ကြည့်ရမှာပဲလေ ... ပြောပြတာကို နောက်က ချက်ချင်းလိုက်ဆွဲမယ် ဆိုရင်တော့ ချက်ခန်းကနေ ပြောပြမှရမယ်ထင်တယ် ... အဲဒါကလည်း လက်တွေ့မှာ မလွယ်လောက်ဘူးဗျာ ... .. .
ဘယ်လိုပုံစံလေးက ကိုဇေကြီးအတွက်လွယ်မလဲဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလားဗျာ ... အကူအညီဆိုတာက ထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်တာက ပိုကောင်းပါတယ် ... အဆင်ပြေမယ့်ပုံစံလေးကို ပြောပြကြည့်ပါဦးဗျာ ... ဒီမှာကလည်း မအားတဲ့သူတွေများတော့ အကောင်းဆုံးအနေအထားလည်း ဖြစ်စေချင်လို့ပါဗျာ .......
စိတ်မပူပါနဲ့ အားလုံးက ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ပါဗျ ... ဒါပေမယ့် ကန့်သတ်ချက်လေးတွေရှိနေလေတော့ ... သူလည်း အဆင်ပြေ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်လို့ပါဗျာ .....
Dragon Warrior ... :7: :7: :7:
ကိုဇေကြီးရေ ..ဒီ post လေးကို crays မှာ လဲတွေ့လို့ဖြေထားပေးပါတယ်။အချိန်ရတဲ့အခါဖြေပေးမယ်ဆိုတာပါ။
အထက်က Dragon Warrior ပြောသွားသလိုပဲ ဒီမှာက သင်တန်းပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လဲ သင်တန်းတွေလဲဖွင့်ထားတာပါ။
အခု ဒီ autocad ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးနေတာတွေက သင်ပြနေတာထက် အတွေ့အကြုံတွေ ပညာတွေ ဖလှယ်ကြတယ် ဆွေးနွေးတယ် ဒီလိုသဘောမျိုးပါ။
ဒီအခက်အခဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှေ့က လူတွေမေးထားတာလေးတွေ အရင်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။autocad ကို ထိစပ်မှူရှိပြီး အဆင်မပြေတဲ့အချက်လေးတွေကို မေးကြ
သိတဲ့သူအဖို့လဲ ဖြေဖို့မြန်သလို ၊မသေချာဘူးဆိုရင်လဲ အကြံပေးကြပါတယ်။အခုကိုဇေမေးတဲ့ ပုံစံက autocad နဲ့ မရင်းနှီးပဲ မေးသလိုဖြစ်နေလို့..သင်တန်းမှာ ဆရာကို ဆွဲပြဖို့မေးသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။
အခု ကိုဇေ request လုပ်သလိုမျိူး လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးက တစ်ရက်ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်မယ်..တစ်ပတ်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်..တစ်လဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်..အချိန်ရတဲ့အခါပေါ့နော်..
အကောင်းဆုံးက ကိုဇေ သင်တန်းမှာတက်လို့ရအောင်ရယ် ၊ တက်လို့ရရင်လဲ အဲဒီက သင်ခန်းစာတွေ အရင်ရအောင်လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင် အခုကိုဇေမေးတဲ့ မေးခွန်းမေးစရာတောင်မလိုလောက်တော့ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းပြပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် အခုလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ သင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မရပါဘူးခင်ဗျာ။ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီဆွဲလိုက် ဖို့ရမ်မှာ ၀င်မေးလိုက်နဲ့သင်နေရတာပါ။
နည်းနည်းလောသလိုဖြစ်သွားရင် စိတ်မရှိကြပါနဲ့။ ကြိုးစားပါဦးမယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာ မပြည့်စုံလို့ပါ ခင်ဗျာ..သင်တန်းဆိုတာ ဖိုရမ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ autocad သင်တန်းပါ။
အခြေခံသင်တန်းအပြင် 3d rendering အခြေခံ သင်တန်း ပါလေ့လာလို့ရပါတယ်။
သင်တန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေလဲ သေချာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အဓိကက forum မှာ အ၀င်အထွက် ..post အရေးအသားတွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေချင်လို့
စည်းကမ်းလေးတွေ ထုတ်ထားပေးတာပါ။ :)
ကျွန်တောဝင်ကြည့်တာ autocad သင်တန်းကလူပြည့်သွားလို့ လက်မခံတော့ဘူးပြောတယ်။ နောက်အသုတ်ကိုစောင့်ရမှလားခင်ဗျာ။
autocad အကြောင်းသင်ပေးတဲ့ ဖိုရမ်ကလည်း အတော်ကို ရှားတာကလားဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ...autocad အကြောင်းကို online က သင်ရတာ အတော့်ကို အချိန်ကုန်ပြီး ထိရောက်မှုနည်းပါတယ်..
တစ်ရာဖိုး ရေးမှ ၃၀..၄၀ ..ဖိုးလောက်တင်တာပါ။တစ်ခြား software တွေနဲ့ မတူပါဘူး...
အခုသင်တန်းက စတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်တစ်တန်းစောင့်ဖို့လိုပါတယ်..
အဲဒီ သင်တန်းဘုတ်ထဲမှာ request လုပ်ထားပေါ့နော်..နောက်တစ်တန်းဖွင့်ရင်လဲ တက်ချင်ပါတယ်ရယ်..
အခုဖွင့်ထားတဲ့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့..ဒါဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်...
ကျွန်တော် ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ 3d rendering သင်တန်းက တော့ သင်တန်းသားမဟုတ်လဲ လေ့လာလို့ရပါတယ်..
အခု အခြေခံသင်တန်းက တော့ အဲလိုရမရ ကျွန်တော်သေချာမ check ရသေးလို့ပါ..အထက်ကရေးသလိုပဲ request လုပ်ထားပေးပါ။
ကျွန်တော်လဲ ပြောကြည့်ပေးပါ့မယ်။ :)
ကျေးဇူးပါ ကိုပါးကြီးရေ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပါမယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ကိုပါးကြီးကအခု Singapore မှာနေတာလား ။ ကျွန်တော်လည်း အခု Singapore မှာပဲခင်ဗျ။ Jurong East မှာ နေပါတယ်။ မသိတာများရှိရင် mail ပို့ပြီးမေးလို့ရလားခင်ဗျ။ ကျွန်တော့ mail က zaygee@gmail.com ပါ။ AutoCAD နဲ့အလုပ်ရချင်လို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ လောလောဆယ်က ကားမောင်းနေရပါတယ်။ အနှောက်အယှက် မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ.....မေးလို့ရပါတယ်...ကျွန်တော်နောက်၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ဆိုရင် pmနဲ့ မေးပို့ပေးပါ့မယ်။ :)
ဒါပေမယ့် ဒီမှာလဲ လေ့လာပြီးမသိတာတွေမေးပါ.ဒီနေရာမှာပဲ ဖြေနိုင်တာဖြေပေးပါ့မယ်။ကျန်တဲ့သူတွေ အတွက်လဲ ပညာရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် နဲနဲ အစပျိုးကြည့်လို့ အခက်အခဲတွေ့တဲ့နေရာမျိုးကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ ဆိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးလောက်ကို ပဲ ဖြေမယ့်သူတွေက
မျှော်လင့်ကြတာကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အရှေ့ကတခေါက်ဆွဲပြစေချင်တယ်ဆိုလို့ ချန်းချန်း flash ဖိုင်လေးတခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အပြီးထိမဆွဲထားပေမယ့်
idea ကတော့ အပြီးထိရောက်စေလောက်မယ်လို့ ထင်တယ်... စမ်းဆွဲကြည့်ပြီးတော့ အဆင်မပြေတဲ့နေရာမျိုးကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ...
ချန်းချန်း အဓိကရည်ညွန်းတာကတော့ dimension အတိအကျမသိတဲ့ drawing တွေဆွဲတဲ့ (ကလေးနည်း) trace လိုက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို သုံးပြထားတာပါ...
engineering drawing တော့သိပ်မဆန်ပါဝူး ဒါပေမယ့် လွယ်ကူ စေလိမ့်မယ်ထင်လို့ပါ.....
ကျေးဇူးပါကိုချန်းရေ ကျွန်တော်က ကိုချန်းရဲ့ volume 1 အခွေနဲ့ AutoCAD စသင်တာဆိုတော့ ကိုချန်းလည်းကျွန်တော့ဆရာသမားပါပဲ။ ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာက project ပုံကြီးတွေကို မဆိုလိုပါဘူး ။ ပုံသေးလေးတွေပေါ့ စသင်ခါစလူတွေ နမူနာယူပြီး ဆွဲတတ်အောင် ရှေ့ကနေတစ်ဆင့်ခြင်းဆွဲပြစေချင်တာပါ။ တစ်ချို့ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေ
(ကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်) command တွေတော်တော်များများကျက်ထားပေမယ့် လက်တွေ့ဆွဲတော့ အဆင်မပြေကြဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ အဲဒါ ပုံဆွဲတဲ့ အယူအဆပိုင်း အားနည်းနေသေးလို့ထင်တယ်ဗျ။ အဲလိုဆို အယူအဆပိုင်း အာကောင်းလာအောင် လုပ်ဖို့နည်းက တစ်ခုပဲရှိတယ်။ များများဆွဲ များများလေ့ကျင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လို သင်တန်းတက်ဖို့ အဆင်မပြေသူတွေ ကိုယ်ဘာသာဆွဲကျင့်တဲ့အခါ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာက ဆွဲနေရင်းတန်းလန်းတစ်ခုမသိရင် မေးစရာလူမရှိဘူးဗျ။ ရှေ့ကနေ ကိုယ်ချန်းတို့လို တတ်ပြီးသားလူတွေ တစ်ဆင့်ခြင်းဆွဲပြတာမြင်ရတော့ အယူအဆတွေကို အတုခိုးလို့ရတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ပိုတိုးတက်အောင် ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ဆွဲတတ်အောင် တော့လေ့ကျင်ယူရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လို စသင်ခါကလူတွေအဖို့ သင်တန်းမှာကလွဲလို့ စာအုပ်တွေမှာရော၊ ဖိုရမ်၊ ဘလော့တွေမှာပါ အဲလို့ နမူနာပုံလေးတွေကို ရှေ့ကဆွဲပြပြီး ဒီလိုပုံလေးကို ဒီနေရာမှာ ဒီလိုလေးဆွဲရတယ်ဟေ့၊ ဒီနေရာလေးကိုတော့ ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ရင် ပိုကောင်းတယ်ဟေ့လို့ သင်ပေးတာမျိုး လေးတွေအားနည်းတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ လေးငါးဆယ်ပုံလောက် သင်ပေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် နောက်ဆင်တူရိုးမှားပုံလေးတွေဆွဲတဲ့အခါ ကျွန်တော့တို့အတွက် ကိုးကားစရာလေးရှိတာပေါ့။ စာအုပ်တွေအများစုမှာသင်ပေးတာ command နဲ့ tool တွေကို သုံးနည်းရှင်းပြထားပြီး စာအုပ်နောက်ဖက်မှာ အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့နမူနာပုံတွေပေးထားတာပါ။ အဲဒီcommand တွေ toolတွေကိုသိရုံနဲ့ ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ မဆွဲနို်င်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်တို့မှာ ဆွဲတဲ့အတွေ့ကြုံမရှိဘူးလေ။ command သုံးတဲ့အတွေ့ကြုံပဲရှိတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ဂစ်တာတီးသင်သလိုပေါ့။ ကောဒ့်တေအားလုံးကိုတော့ မှန်အောင်ကိုင်တတ်ပါရဲ့ ဒါပေမယ် လက်ခတ်ကိုမခတ်တတ်တော့ တီးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကောဒ့်ကအသေးဖြစ်ပြီး လက်ခတ်ကအရှင်ကိုး အဲဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော့အမြင်ကတော့ command ကအသေဖြစ်ပြီး အယူအဆနဲ့ အင်ဂျင်နီယာအမြင်က အရှင်ပါ။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်တို့ command တွေသင်သလို ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ဆိုပြီးသင်လို့မရတော့ပုံတွေကိုယ်တိုင်လည်းဆွဲ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဆွဲတာလည်း လေ့လာရင်းသင်သွားရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်လာရင် အဲဒီလိုအပ်ချက်လေးကို နောက်လူတွေအတွက် ရသလောက်လေးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော်အထက်ကပြောသလိုပုံစံလေးကို ကျွန်တော်တို့လိုသင်ယူခါက လူတော်တော်များများ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်အားလုံးကိုယ်စားလေး ၀င်ပြောပေးပါတာခင်ဗျာ။ ဆရာဝင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ချင်တဲ့သူဟာ သူရှေ့ကအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသားတွေသရုပ်ဆောင်တာကို အတုယူ နမူနာကြည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ဖန်တီးတတ်အောင် လေ့ကျင်ယူရသလို ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုချန်းတို့လို တတ်ပြီးသားလူတွေ ရှေ့ကဆွဲပြတာကိုကြည့်ပြီး လေ့လာသင်ယူရမှာပါ။
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဘလော့တွေ၊ ဖိုရမ်တွေမှာ ပြောကြဆွေးနွေးကြတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ AutoCAD အပိုင်းကအနည်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ မျှဝေပေးနေတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ကိုချန်းအပါအ၀င် အင်မတန်ကိုနည်းပါတယ်။ ပြောပြစရာ အကူအညီတောင်းစရာ ဒီလူတွေပဲရှိတာမို့ စာသင်သားများဖက်မှ တောင်းတမှု့လေးကို ၀င်ရောက်ဆော်သြပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုဇေကြီးဒီနေရာကautocad သင်တန်းပါပဲ http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5213.0.html
အဲဒီက ကိုသန့်ဖော်တင်ထားတဲ့ PDF တွေဒေါင်းပြီး လေ့လာကြည့်ပြီးပြီလား...သင်တန်းသားဆိုတာ မရှင်းလို့ပြန်မေးတာ ..အိမ်စာလုပ်ရတာပဲပိုတာပါ။
အဲဒါတွေက ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ရင်လဲ အတူတူပါပဲ.. :)
ကိုဇေကြီးဒီနေရာကautocad သင်တန်းပါပဲ http://www.myanmarengineer.org/forum/indexp/topic,5213.0.html
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း သင်တန်းသားဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပို့စ်ကတော့ မပြည့်သေးဘူးဗျို့။
I cannot open the Layer Properties Manager. When I clicked on the Layer Properties Manager, one box appears as follows.
Then when i click &quot; Yes&quot;, one error reporting as follows ,
Then , autocad closed all.
So , please help me what&#039;s happening to my Autocad 2007, and i never happened before.
Please advice me how I can solve this error.
အကိုရေ No ဆိုပြီးအားပေးကြည့်ပါအုန်း
Layer Manager မခေါ်ခင် အရင်ဆုံး scale ကို reset လုပ်လိုက်ပါ
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] &lt;Add&gt;: r
Reset scale list to defaults? [Yes/No] &lt;No&gt;: y
နောက်စိတ်ချရအောင် audit ပါလုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါပြီးမှာ ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်တော် AutoCAD မှာ Data Link ကနေ Excel sheet ထည့်တာ ပထမပုံတွေတုန်းကရတယ် ဗျ။
နောက်တခေါက်ဆွဲတဲ့ အခါမှာ ဇယား ကပိန်ရှည်ကြီးဖြစ်နေတယ် သေရာ :&#039;(
အဲဒါနဲ့ အရင်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ အဲဒီ Excel file ကိုထည့်ကြည့်တော့လဲ ပုံမှန်အတိုင်းဘဲ၊ :o
Excel file ထည့်တယ်ဆိုတာက Data Link Manager ကနေ link လုပ် ပြီး Table common ကနေ အဲဒီ excel file ကိုထည့်တာဗျ
ကျွန်တော်ပြောတာ ရှုပ်နေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ဆွဲထား တဲ့ autoCAD file လေးနဲ့ Excel file လေးကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အောက်ကလင့်လေးပါ file size သေးသေး လေးပါ ။နည်းနည်းလောက် အချိန်ပေးပြီး ကူညီကြပါဦး ရှဲ့ရှဲ့ :e
Can you tell me how to draw gear with 3D in autocad?
အယ်........ ငါ့ အကိုတွေ အမ တွေဘီသူ မှမအားကြဘူးနဲ့ တူတယ် :&#039;(
ကျွန်တော် AutoCAD မှာ Data Link ကနေ Excel sheet ထည့်တာ ပထမပုံတွေတုန်းကရတယ် ဗျ။
အဲဒါနဲ့ အရင်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ အဲဒီ Excel file ကိုထည့်ကြည့်တော့လဲ ပုံမှန်အတိုင်းဘဲ၊ :o
Excel file ထည့်တယ်ဆိုတာက Data Link Manager ကနေ link လုပ် ပြီး Table common ကနေ အဲဒီ excel file ကိုထည့်တာဗျ
ကျွန်တော်ပြောတာ ရှုပ်နေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ဆွဲထား တဲ့ autoCAD file လေးနဲ့ Excel file လေးကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အောက်ကလင့်လေးပါ file size သေးသေး လေးပါ ။နည်းနည်းလောက် အချိန်ပေးပြီး ကူညီကြပါဦး ရှဲ့ရှဲ့ :e
1. Unformat all your merged cells in Excel, then delete extra rows. It&#039;s better not to format at all in excel.
2. Delete your existing table in AutoCAD.
3. go to &quot;Tools \_ Data Links \_ Data Link Manger&quot;
4. right click on your link (in yr case &quot;schedule&quot;), then click &quot;edit&quot;
5. at the bottom right of the new window, click &quot;&gt;&quot; which is &quot;More Options&quot;.
6. Clear the checked box &quot;Use Excel Formatting&quot; under Cell Formatting.
7. Reinsert your table.
hope this would sort out your problem :7:
Hi, ko chit tee,
Can you tell me how to draw &quot;Gear&quot; with 3D in autocad 2007?
အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်ဗျာ :e
မရဘူး အစ်ကိုရေ အဟဲ
Clear the checked box &quot;Use Excel Formatting&quot; under Cell Formatting.
ဟုတ်တယ်ဗျ အဲသလိုလုပ် ကြည့်ရင် တခြား ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင်တွေထဲမှာဆိုရင် တော့ preview ထဲမှာ ဇယားကြီးက ပိန်သွား လိုက် ၀လာလိုက်ဖြစ်သွားတယ်
ခုမှာက မရဘူးဗျ ဘာလို့လဲမသိဘူး :O
တခြားဖိုင်မှာ ထည့်ပြီး အဲဒီဖိုင်ကနေ Copy - Paste လုပ်ရင်တော့ရတယ်
တိုက်ရိုက် table-data link-ကနေယူရင်တော့မရဘူး ပိန်ရှည်ကြီးဘဲ
ကျေးဇူးများဂျီး တင်ပါတယ် :7: :7:
ကျနော်စက်ထဲမှာတော့ ရတယ်ဗျ... ဒါပေမဲ့ preview နဲ့ ပြောင်းပြန်တော့ ဖြစ်နေတယ်...
preview က သိပ် အားကိုးလို့ မရပါ... preview ထဲမှာ ပိန်ရှည်ရှည် ပေါ်နေပေမဲ့ တကယ် model space ထဲ ထည့်လိုက်တော့ အတည့် အတိုင်းရတယ်...
excel format ကို clear လုပ်ထားတော့ Excel Formatting ကို မသုံးတဲ့ အတွက် AutoCAD ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ table format က overwrite လုပ်ရမှာပါ..
ဆိုတော့ AutoCAD ထဲမှာ default table style အတိုင်း လာပေါ်လိမ့်မယ်.. cad file မှာ column width ကို အရင် ချိန်ထားဖို့ လိုလိမ့်မယ်....
data link tale မှာက မထည့်ခင် row height / column width တွေ ချိန်လို့ မရတော့ ရိုးရိုး table နဲ့ လိုချင်တဲ့ row height / column width ကို အရင် ချိန်ထားဘို့ လိုမယ်...
column width ကို လိုချင်တဲ့ ပမာဏ (ဥပမာ ၁၂ ပေ) default ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင် ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့က blank table တခုကို column width ၁၂ပေ ထားပြီး ထည့်လိုက်ပါ.. အဲဒီ blank table ကို ထည့်ပြီး ပြန်ဖျက်လိုက်လို့လဲ ရပါတယ်... ဒါဆိုရင် table command မှာ column width 12&#039; default ဖြစ်သွားပြီ... ပြီးမှ data link table ကို ထည့်ပါ...
နောက် option တခုကတော့ excel formating ကို clear မလုပ်ဘဲ paper space ထဲ မှာ table ကို ထည့်ကြည့်ဖို့ပါ..
ကျွန်တော်ကအခုမှ Isometric ပုံတွေစဆွဲကြည့်တာပါ။ snap and grid&gt;snap style&gt;isometric ကိုပြောင်းပြီးတော့ စဆွဲတော့ courser ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ grid ကိုလည်းမဖော်ထားပဲနဲ့ ကာဆာကိုလှုပ်ရတာ ထောက်နေတယ်ဗျာ။ setting ပိုင်းဆိုင်ရာများလွဲနေသလားမသိဘူး။ သင်ပေးကြပါဦးဗျာ။
F9 ကီးကို အားပေးလိုက်ပါ။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါကိုလိပ်ကြီးရေ အခုပဲ အားပေးလိုက်ပါမယ်။
SNAP OFF ထားမှ အဆင်ပြေမယ်ဗျ...object snap မဟုတ်ဘူးနော်...SNAP ..;)
အင်တာဗူးဖြေတာဗျာ ပုံလေးကစလွယ်လေး ဆွဲခိုင်းတယ်ဆိုပြီးပျော်နေတာ :4: :4:
ပြိးတော့ plotting လုပ်ခိုင်းတော့မှ ကွိုင်တက်ပါလေရော :&#039;( :&#039;( ကျွန်တော် တို့ model မှာပုံဆွဲပြိး layout ကိုပြောင်းရင် background အဖြူရောင် စာရွက်အဖြူရောင်လေးထွက်လာတယ်ဟုတ်..
အဲဒီမှာမှ ကိုယ့် page set up manager ကနေ စာရွက်ရေးဘာညာတွေလုပ် window နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Display တွေဘာတွေနဲ့ ပုံထည့် စကေးတွေဘာတွေချိန်ရင်ချိန် အဲလိုဆွဲခဲ့ကြတယ်မလား။
ခုဟာကြီးက layout ကိုပြောင်းလိုက်တာ model မှာလိုဘဲ အမည်းကြီးဗျ background ကော စာရွက်ကော၊ အဲတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိဘူး :angry: :angry:
window နဲ့ဘဲကောက်ရမလို mv common သုံးပြန်ရင်လဲ ဘယ်ကစပြိး window ဆွဲရမှန်းမသိဘူး ။
သူက company description တွေကိုပါ တခြားဖိုင်ကနေ copy ယူခိုင်းတာဗျ။
အဲဒါလုပ်ကြပါဦး အဲဒီ layout က background ကြီးကော စာရွက်ကြီးကောပြန်ဖြူသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
လမ်းကြုံတဲ့သူ ၀င်ပြောပေးကြပါဥိးနော် မြန်မ်ြန်လေး ဟူးးးးးးးးးးးးးးးး(သက်ပြင်းချသံ) :(( :(( :(( :((
ဘာ version သုံးလဲ ဆိုတာလဲ နောက်တစ်ခါ မေးခဲ့ရင် ထည့်ပြောပေးပါနော်..
commandline မှာ options လို့ရိုက်လိုက်ပြီး ...ကျလာတဲ့ dialogbox က display tab ကို နှိပ်ပြီးတော့
အခုတွဲတင်တဲ့ပုံလေးမှာပါတဲ့ Layout element (အနီနဲ့ ဘောင်ခတ် စတား ပြထားပါတယ်) အောက်က
setting အတိုင်း အမှတ်တွေ ခြစ်သင့်ခြစ် ဖြုတ်သင့်ဖြုတ်ပါ.......
ပြီးရင် ..apply လုပ်ထွက်ပြီး စမ်းကြည့်ပါ.....plot လုပ်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ...
ဗဟုသုတအနေနဲ့ နောက်ထပ်က ပုံမှာပဲ အပေါ်နားမှာ အနီနဲ့ပဲ...color ဆိုတဲ့ tab လေးကိုတော့ နှိပ်ကြည့်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ dialogbox က ညာဘက်က ..model space , sheet/layout,...etc စသဖြင့်နဲ့
ဘယ်ဘက်က အဲဒီ ညာဘက်ကရွေးထားတဲ့ ..ဥပမာ ..sheet/layout ရွေးထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်မှာ ..အဲဒီ sheet..layout တွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ uniform color တို့...text color တို့
စသဖြင့် color နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကြိူက်ပြင်လို့ရပါတယ်..စမ်းကြည့်ပေါ့...း)
သူတို့သုံးတာက ၂၀၀၆ ကိုသုံးတာပါ ဘယ်လိုပြင်ပြင် ကျွန်တော်ပြောသလိုတော့ မမည်းသွားဘူးဗျ
ကျွန်တော့ စက်ထဲမှာသုံးထားတာက ၂၀၀၈ ပါ။ အဲဒါကြောင့်လားတော့မသိဘူး
ခုကျွန်တော်ကြုံလာတဲ့ ဟာက model မှာလိုမျိုးကို အားလုံးမည်းနေတာ စာရွက်ကိုဘောင်လေးကွတ်ထားတာတောင် မမြင်ရဘူး (အဲဒါက ၂၀၀၆ မှာနော် )
ပုံကစာရွက်ရဲ့ဘယ်နေရာရောက်နေလဲတောင်မသိဘူးဗျာ။ plot preview မှာကြည့်မှသိတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပြင်ရမှန်းမသိဘူးဗျ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခုလိုချက်ခြင်းရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :7: :7:
အဲဒါက ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ဗျ...အဓိကက paper spaceက print ထုတ်တဲ့ စာရွက် လေးကို မြင်ရ print ထုတ်ရသွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်..
ဟုတ်တယ်ဟုတ်..း) ..print ထုတ်ရတာ အဆင်မပြေရင်လဲ ပြောပါဦးခင်ဗျာ..
autoCAD နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူး ဖြေရင် ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြသနာ တခုဘဲဗျ...
နောက်တခါ ကြရင် options ကနေ Profile setting မှာ reset သာ လုပ်ပလိုက်.. factory default ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်... အဲလို လုပ်လိုက်ရင် တခုရှိတာ သူတို့ရဲ့ file location တွေ ဘာတွေ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်... ဒါပေမဲ့ company တော်တော်များများမှာ profile file back up ရှိတတ်တော့ သူ့ဘာသာ ပြန် import ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်...
ကျနော် အပါအ၀င် တော်တော်များများက customised လုပ်လေ့ရှိကြတယ်.. အဲဒီ display တင် မဟုတ်ဘဲ command alias တွေ ပြောင်းသုံးတာမျိုးပေါ့နော်... ကျနော်ဆိုရင် copy က ခနခန သုံးရလို့ သူ့ကို &quot;c&quot; ဘဲထားတယ်.. စက်ရဲ့ default က circle ဖြစ်နေတော့ သူများစက်သွားကိုင်ရင် ပြသနာ တက်ကရော.. တခြား customised shortcut တွေရှိသေးတယ်... Cad နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တခုကနေ တခု ပြောင်းမယ် ဆိုရင် အင်တာဗျူးတိုင်းမှာ cad test ကြုံရနိုင်ပါတယ်.. အကောင်းဆုံးက စက်ရဲ့ factory default တော်တော်များများနဲ့ ရင်းနှီးထားတာ interview မှာ ပို အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့.. သူတို့ ဘာတွေ change ထားမှန်း မသိရတဲ့ အပေါ်ကလို ပြသနာမျိူး ဆိုရင် factory default reset လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ် ပိုင်တဲ့ setting တွေ ပြန်ဖြစ်သွားရော... speed ကို စမ်းချင်တဲ့ test မျိုး အတွက် ဆိုရင်ကြတော့ ဒါတွေက စကားပြောလာမယ်...
ETABS version9 install လုပ်တာ လိုင်စင် error ပြနေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ...ကျေူှးဇူးပြုပြီးတော့ ဖြေကြားပေးကြပါ :-[ :-[
သူတောင်းတဲ့ လိုင်စင်ဖိုင်ကိုလဲ copy , paste လုပ်ပါတယ် ဒါ ပေမယ့် error ပဲ ဖြစ်နေလို့ပါ :-[
ဒီနေရာက autocad အပိုင်း ဆွေးနွေးတဲ့ နေရာလေးပါ..
မြို့ပြ အင်ဂျီနီယာ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မေးပါနော်..
မေးစရာလေးရှိပါတယ် အရေးကြီးနေလို့ ပါ :e :e :e :e :e
ပထမ ပုံမှာ အိမ်တစ်လုံး ဧ။် first story, second story, third story အစရှိသဖြင့် drawing တွေအများကြီးကိုစုထည့်ထားပါတယ်။
ဒုတိယပုံကတော့ first story တစ်ထပ်စာဘဲပါပါတယ်။( Beam plan သတ်သတ်ပါ )
မေးခွန်းကတော့ ပထမပုံထဲက ( ဥပမာ first story ) ထဲက ရေပိုက်လိုင်း သို့မဟုတ် material တစ်ခုခု ကို ဒုတိယပုံထဲသို့ထည့်ပေးရမည်။
တစ်ခါတည်း အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်နေ၇မည်။( မဖြစ်လျှင် အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် ချိန်နိုင်၇မည်။ ) ထည့်လိုက်သော ပုံသည် ပြန်လည်ပြုပြင်လို့ရရမည်( Trim ဖြတ်ခြင်း၊ fillet ချိုးခြင်း )
ပြိးတော့ ပုံကို ကော်ပီပေ့စ် နှင့်ထည့် ရမည်လား (၀ါ) တခြားနည်း ဖြင့်ထည့်ရမည်လော ဖြေရှင်းစေလိုပါသည်။
ထိုက်တန်စွာကျေးဇူးဆပ်ပါမည် ( ဘီဘီတိုက်ခြင်း ကော်ကော်တိုက်ခြင်း အဟဲ :4: :4: )
ကလေးကိုရှင်းပြသလို တဆင့်ခြင်းရှင်းပြပေးစေလိုပါသည် ( ငမောင်သည် အလွန်ပိန်းသောကြောင့်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည် )
လိုရင်းကိုပြောရရင် သူတို့က Main con: ဖြစ်ပါတယ်. sub con; များ ( M&amp;E, ceiling အဲယားကွန်း, window and door ဘာညာသရကာများ ) ကပေးသော drawing များကို
ပုံတစ်ခုထဲတွင်စုထည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထို sub con; များကပုံ ကိုကောင်းကောင်း မဆွဲပဲ ပုံတစ်ပုံ( ဖိုင်တစ်ဖိုင် )ထဲတွင်ရှိသမျှပုံအကုန်စုထည့်ထားပါသည်။ သေရော
အဲဒါ ctrl+shift+c နှင့် ယူပီးကော်ပီပေ့စ် လုပ်လျှင် ယူလိုက်သောပုံမှာ ထည့်ချင်သောပုံ(ဒုတိယ ပုံ ) တွင်ပေါက်စိကွေးလေးဖြစ်နေပါသည်။ external reference နှင့်ယူလျှင်လည်းထိုနည်းတူပါ။
sc( reference တွေဘာတွေယူပြီး) နှင့်ညှိလျှင်လဲ ကြာပါသည်။ လျှင်မြန်သောနည်းလမ်းကိုပေးကြပါကုန်။
မည်သည့်ပိုစ်မျှ မတင်နိုင်လောက်အောင် သေအောင်ခေါင်းစား သေအောင်စိတ်ဓါတ်ကျနေပါသည်။
မည်သူမှမပြောပြပါက MEF တွင် မာလကီးယား သွားသော မန်ဘာ တစ်ယောက် ဟု နာမည် ကြီးသွားနိုင်သည်(ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။)
တစ်ဆင့်စီတော့ ရှင်းဖို့ အချိန်မရဘူးညီရေ..ရှင်းဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါသေးတယ်..း) ပြဿနာက ကျွန်တော့် စက်မှာ
၂၀၁၁ ကော ၂၀၁၀ ကော အဲလို ကော်ပီ ပေစ့် ကို ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တာ ဘယ်လိုမှ ကိုမဖြစ်ပဲ အဆင်ပြေနေတာနဲ့ အချိန်ကြာသွားတယ်။
ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကို အရင် သိဖို့လိုပါတယ်..ဒီနေရာမှ ကျွန်တော် ရေးထားပေးဘူးပါတယ် အရင်သေချာ ဖတ်ကြည့်ပါ..
အမြန်ဆုံး နည်းပေးရမယ်ဆိုရင် ခေါ်ထည့်မယ့် ဖိုင်ထဲက အကုန်လုံးကို လက်ခံမယ့် ဖိုင်ထဲကို copy လုပ်လိုက်တဲ့အခါ် သေးနေတယ်ဆိုရင်
နဂိုပုံတွေနဲ့ ဝေးရာ မှာ paste လုပ်ထားလိုက်ပေါ့..ပြီးရင် အဲဒါတွေ အကုန်ရွေးပြီး scale reference နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းကြီးလိုက်ပါ။
ပြီးမှ base point ကောက်ပြီး လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ကွက်တိချလိုက်ပေါ့။
သဘောတရားက တစ်ဖိုင်နဲ့ တစ်ဖိုင်မဟုတ်ပဲ...တစ်ဖိုထဲမှာ အရင် အတူပေါင်း..ပြီးရင် သေးနေတာတွေ အားလုံးကို လိုချင်တဲ့ unit ရအောင် scale reference နဲ့ ကြီးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် အေးဆေး copy ..လုပ်ရုံပေါ့..ဒီထက် မြန်တာမရှိတော့ဘူး.... :)
command မှာ L လို့၇ိုက်လိုက်တာကိုစက်က မသိတော့လို့ပါ။ redefine လုပ်ကြည့်တာလည်းမ၇ဘူး
ပြိးတော့ ပုံထဲမှာဆွဲထားတဲ့ center line တွေက တကယ်တမ်းပုံထုတ်တဲ့အခါကျတော့
center line မဟုတ်တော့ဘဲ ရိုးရိုး Line တွေအဖြစ်ပေါ်နေလို့ပါ.. ဘယ်လိုပြင်ရမှာပါလဲ။
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရတော့ ..အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်..ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းက ပြောလိုက်..လုပ်ကြည့်လိုက်..
မရလိုက် ဖြစ်နေရင် ကြာနေမယ်ထင်ပါတယ်.။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် သေချာပေါက်ဖြေရှင်းနည်းကတော့ install လုပ်တဲ့ cd ထည့်ပြီး
repair mode နဲ့ အင်စတောကြည့်ပါ.။မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ uninstall လုပ်ပြီး အသစ်ပဲ အင်စတောလိုက်ပါ. ;D
ီDrive C: အောက်ကနေတစ်ဆင့် programs &gt; AutoCAD 2008 ( or whatever )&gt;support ကို သွားကြည့်ပါ..အဲဒီမှာ Acad.pgp ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေး ရှိမရှိ တစ်ချက်လောက် စစ်ကြည့်ပါ..( အဲဒီဖိုင်က AutoCAD Program Parameters ဖိုင်ပါ ).. အဲဒီဖိုင်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ပြင်ရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်..နေရာမှန် Search Path မှာ ရှာမတွေ့ တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... ရှာမတွေ့ တော့ရင် အဲဒီဖိုင်ကို ပြန်ရှာပြီး Support folder အောက်မှာ ပြန်ထားလိုက်ပြီး .. Autocad ကို ပိတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်.. computer ကို restart လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လုပ်လိုက်ပါ.. ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်..
Centre Line မဟုတ်တော့ဘဲ.. ရိုးရိုးလိုင်းတွေ ရတာက line ရဲ့properties ပမာဏနဲ့ ပဲ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်.. လိုအပ်တာထက် သိပ်နည်းနေရင် ပုံမှာကြည့်တုန်းက centre line .. print ထုတ်လိုက်ရင် ရိုးရိုးလိုင်း ( တစ်ဆက်တည်းလိုင်း ) ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်.. အဲဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့Centre line ကို ထောက်ပြီး mo commands ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ( line ကို ထောက်ပြီး Double click နှိပ်လိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်)..သူ့ ရဲ့properties ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီမှာ General မှာ line type scale နဲ့thickness မှာ လိုတိုးပိုလျော့လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Print မလုပ်ခင် preview ပြန်ကြည့်ပေးပါ...
ကျနော် နားလည်မှုလွဲတာ ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ .. :4:
အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဖြုတ်ချပြိးပြန်တင်လိုက်လို့ဆွဲလို့တော့၇သွားပါတယ် :) :)
program file &gt; autocad2008 &gt; support file ထဲမှာ Acad.pgp ဆိုတာက မရှီ်ဘူးကိုဖြိုး( ဆွဲလို့၇တဲ့စက်တစ်စက်ထဲမှာဝင်ကြည့်တာပါ)
အဲဒိထဲမှာရှိတာတွေက acad2008.lsp စတဲ့ Lsp ဖိုင်တွေတော့တော်တော်များများ ပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့များဆိုင်သလားမသိဘူးနော်....
ကျနော့်ကြုံဖူးသလောက်ကတော့ အဲဒီဖိုင်ကလေးက ဒုက္ခပေးရင် ခု ညီမ ကြုံရသလိုမျိုးဖြစ်တာပါပဲ.. အဲဒီအခါကျ ဒီဖိုင်လေးကိုပဲ တခြားနေရာကနေ ဒေါင်းလုတ်ချပြီး ထည့်လိုက်ရင် ကောင်းသွားရော... တခြား ဖြေရှင်းနည်းတော့ ကျနော်မသိဘူး :4: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးလေ... အဲဒီအောက်မှာ မရှိပေမယ့်လည်း search path ပေါ်မှာရှိနေလို့ ထင်ပါတယ်....
pgp file က user profile အောက်မှာလည်း ထားတတ်တယ်... ကျနော် သတိထားမိသလောက် နောက်ပိုင်း မှာ user profile အောက်မှာဘဲ ရှိတတ်တယ်... profile folders တွေက လည်း OS (xp, vista, 7) ကွာရင် arrangement နဲနဲ ပြောင်းသွားတတ်တာ ... search နဲ့ ရှာလို့ မတွေ့တာ ကျနော်တော့ ၂ခါ ၃ခါ ဖြစ်ဘူးတယ် ဘာလို့လဲ တော့ မသိဘူး... တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာ pgp file တွေ copy ကူးလာပြီး autoCAD file path ထဲမှာ ၂ / ၃ဖိုင် ဖြစ်နေရင် ဘယ် pgp file နဲ့ အလုပ်လုပ်နေသလဲ မသိတော့တာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်... အဲဒါကြောင့် အဲဒီ file ကို ရှာချင်ရင် ကျနော်က express tools ကနေ command alias ပြောင်းမယ် ဆိုပြီး တခုခု ကို အစမ်း ပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်... အဲဒါဆိုရင် စက်က pgp file ရှိတဲ့ နေရာကို ပြပြီး overwrite လုပ်ဖို့ confirmation တောင်းပါတယ်... အဲဒီမှာ active ဖြစ်နေတဲ့ pgp file နဲ့ file path ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်... ကျနော့ ပုံမှာ 2011 နဲ့ ပြထားပေမဲ့ 2008 မှာလည်း အတူတူဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
centre line ကို သူ့ scale နဲ့သူ မှန်မှန်ကန်ကန် ပေါ်အောင် drawing units (imperial &amp; metric), global line type scale &amp; individual line type scale, line type itself, innotative scale အားလုံးပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်...
default line type တွေထဲမှာ centre line ပုံစံပေးနိုင်တဲ့ &quot;ACAD_ISO08W100&quot; ရယ် &quot;Center, Center2, CenterX2&quot; စသဖြင့် ရှိပါတယ်... ပထမဆုံး &quot;ACAD_ISO08W100&quot; line type က metric unit အတွက် ဖြစ်ပါတယ်... အဲဒီ ၂ ခုကို global line type scale &amp; individual line type scale ၂ခုလုံး ၁ မှာ ထားပြီး ကြည့်ရင် ကွာခြားမှု တွေ့နိုင်ပါတယ်...
ကျနော့် personal အရ line တွေကို individual scale ကို ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့မှ ပြောင်းပါတယ်... normal ကတော့ ၁ ဘဲ ထားပါတယ်.... ပုံတပုံထဲမှာ line type အတူတူ ချင်းကို scale ပြောင်းထားတဲ့ line နဲ့ မပြောင်းတဲ့ line ပုံစံကွဲသွားပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းသွားမှာ မလိုချင်လို့ပါ...
အသုံးပြုတဲ့ drawing unit နဲ့ line type မှန်တယ် ဆိုရင် (global) linetypescale (alias - lts) ကို print ထုတ်မဲ့ scale အတိုင်း ထားရင် သူစံထားထားတဲ့ scale ကို ရနိုင်ပါတယ်... innotative scale setting ကို ပုံထုတ်မဲ့ scale setting ပြောင်း ရင်လည်း လိုက်ပြောင်းပါတယ်... innotative scale setting ကို ကိုယ် ထုတ်မဲ့ scale ထားရင် lts=1 ဘဲ ထားရပါမယ်... btw, regen လုပ်လိုက်မှ နောက် setting နဲ့ ပေါ်တာကိုတော့ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ...
ကျနော့် သဘောအရ ဆိုရင် New File စခေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်သုံးမဲ့ unit အတွက် ပြင်ထားတဲ့ template file ကနေ စသုံးစေချင်ပါတယ်... autocad ရဲ့ default template တွေထဲမှာ unit ၂ မျိုးလုံး အတွက် ပြင်ပေးထားပါတယ်... ကျနော် ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အားလုံး set လုပ်ထားတဲ့ ကျနော် template နဲ့ဘဲ သုံးလေ့ရှိပါတယ်...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုphyo နှင့် Mz
acad.pgp file ကို၇ှာလို့တွေ့ပါပြိ။
၂၀၀၈ မှာtool&gt; customize&gt; edit program parameters (acad.pgp) ဆိုပြိးရှာလို့တွေ့ပါတယ်။
သိချင်တာလေးနဲနဲ ရှိလို့ပါ။ :7: :7:
tool bar တွေကို common နဲ့ခေါ်ပြီးရွေးလို့ရပါသလား ရှိရင်ပြောပြကြပါ။ ( ကျွန်တော် တို့အရင်မော်ဒယ်တွေဆို အပေါ်နားမှာ right click နိပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်လေ။
၂၀၁၀ ကျတော့ မရတော့လို့ )
ပြီးတော့ status bar ပျောက်နေတာကိုလည်း ဘယ်လိုပြန်ဖေါ်လဲမသိဘူးနော် ၂၀၁၀ မှာဘဲ အဲဒါလဲ
ပြီးတော့ ၂၀၁၀ သုံးရင်ဘာလေးတွေသိထားရမယ် ဆိုတာလေးပြောပြပါခင်ဗျာ..
ကျွန်တော့စက်ထဲမှာက လည်း ၂၀၁၀ မရှိလို့ပါ။ common လေးတွေနဲ့သုံးရင် ဘယ်မော်ဒယ်အဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ( ကြိုတင်ပြီး )
Cmd မှာ...&quot;workspace&quot; enter setCurrent အတွက် &quot; C &quot; enter &quot; AutoCAD Classic &quot; enter လို့ အားပေးလိုက်ရင် ဘယ်ဗားရှင်းတွေ ပြောင်းပြောင်း
မဟောင်းတဲ့ အဟောင်း ဗားရှင်းလေးရပါမယ်...
toolbars အတွက်က cmd မှာ.. &quot; -toolbar &quot; လို့ရိုက် ပြီးရင်..Enter toolbar name or [ALL]: လို့မေးရင် ကိုယ် လိုချင်တဲ့ဟာ ရိုက်လိုက်..အဲဒါဆိုပြီးရင် ရှိနေတာကို hide မလား..show မလား စသဖြင့်မေးလိမ့်မယ်..
လိုတာ ရွေးလိုက်ပေါ့...ဥပမာ ..draw tool bar အတွက်ဆို ..draw လို့ရုိုက်ပေးလိုက်ပေါ့...မသိရင်တော့ all သာရိုက်လိုက် ..အကုန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်..အဲဒီထဲက မှ မလိုတာရွေး ပိတ်ပေတော့.... :)
2010 ထဲက command&gt; mesh&gt; box နဲ့ဆွဲထားတဲ့ box တစ်ခု၇ဲ့ အပေါ်အနားစောင်းကို fillet လုပ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်၇လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ။
စနိုးတို့ အသုံးမကျပုံများတော့ တစ်နေ့နဲ့တစ်မနက်လုံးကြိုးစားဆွဲကြည့်နေတာ ဘယ်လိုမှ မ၇လို့ပါ။ vertex တွေကနေကိုင်ေ၇ွ့တော့လည်း
chamfer လိုမျိူးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ။ help file ထဲလိုက်ကြည့်တော့ crease နဲ့ meshuncrease ဆိုတာတော့တွေ့တယ် ။အဟဲ.......ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်ဘူး......... :4: ကျေးဇူးပြုပြိး၇ှင်းပြပေးပါဥိး..........
အဲဒီ mesh box ကို select လုပ်ပြီး properties dialog box ကနေ attach လုပ်ထားတဲ့ ပုံထဲကလို level4ဆို ရပါပြီ..
တစ်ပုံက level4, တစ်ပုံက level0ပါ...ကြားက ..1,2,3, တွေလည်း စမ်းကြည့်ပေါ့.. :)
ဟုတ်ကဲ့..ကိုပါကြိး.. အဲဒိလိုလုပ်၇င် box တစ်ခုလုံး၇ဲ့အနားစောင်းတွေအကုန်smooth ဖြစ်သွားလို့ပါ.. အပေါ်အနားစောင်းလေးတွေကို ပဲ ပြင်ချင်တာပါ။
vertex တွေကို ခပ်စိပ်စိပ်လေးပေးပြိးပြင်ကြည့်တော့ ရသလိုတော့၇ှီပါတယ် ဒါပေမယ့် အနားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် က မညိတော့ပြန်ဘူး....
အချိန်လည်းအ၇မ်းကြာပါတယ်.. အဲလိုတွေဖြစ်နေလို့ပါ။အချိန်၇ရင်ရှင်းပြပေးပါနော်။။ ကျေးဇူးအများကြိးတင်ပါတယ်..
explode လုပ်ပြိး fillet လုပ်၇င်တော့၇ပေမယ့် အဲဒါက surface ကြိးဖြစ်သွားပြန်ေ၇ာ..သူများဆွဲထားတဲ့ပုံတစ်ပုံမှာ mesh ထဲမှာပဲပြင်ထားတာတွေူ့ဖူးလို့ပါ........
ကိုပါကြီး သက်သာသွားအောင်လို့ ၀င်ဖြေပေးတာပါ... (တကယ်ကတော့ ဖြေချင်လွန်းလို့ပါ :haha:)
ဟုတ်တယ် ဆိုရင်တော့ &quot;Add Crease&quot; နဲ့ မလုံးစေချင်တာတွေကို အရင်ရွေးပြီး Crease Always လုပ်ထားလိုက်ပါ... ပြီးရင် ကိုပါကြီး ပြောသလို လိုချင်တဲ့ smoothness setting ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုရပါတယ်...
ဟုတ်တယ် ကိုMZေ၇.....အဲလိုလေးလုပ်ချင်နေတာ.... ကျေးဇူးအများကြိးတင်ပါတယ်..ခုလို၇ှင်းပြပေးတဲ့ ကိုပါကြိးကိုေ၇ာ ကိုMZ ကိုေ၇ာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး၇တာ အားလည်းနာလာပါပြိ ။ အဟဲ.........ဒါပေမယ့်် နည်းနည်းလောက်တော့မေးဥိးမယ်နော်
ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကို animation လုပ်တဲ့အခါ record တစ်ခါတည်းလုပ်ပြိးတော့ အဲဒိ် file ကို avi , mpg
format ပြောင်းပြိး save တာလေးလေ ၂၀၀၈ ထဲမှာလုပ်တတ်တယ် အခု 2010 မှာ ကျတော့ file ကိုဘယ်လိုသိမ်းရမှန်းမသိတော့ဘူး
အဟဲ.....save animation ဆိုတာလေးလည်းမတွေ့ဘူး... စနိးက အဲဒါလေးကနေပဲ သိမ်းတတ်တာ........၂၀၁၀ မှာ ဘယ်လိုလုပ်၇တယ်ဆိုတာလေး
မေး၇တာ အားလည်းနာလာပါပြိ ။ အဟဲ.........ဒါပေမယ့် နည်းနည်းလောက်တော့မေးဥိးမယ်နော်
Ribbon: Render tab &gt; Animations panel &gt; Animation Motion
Menu: View &gt; Motion Path Animations
Command entry: anipath
if you don&#039;t find Animations panel in Ribbon, right clik on ribbon free space then tick animation as shown
သိချင်တာလေး ရှိလို့ပါ။ urgent ပါ အကိုတွေ အမတွေကို အပူကပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Curve တစ်ခုဆွဲပါမယ်။ အဲဒီ Curve ပေါ်မှာ ဥပမာ 3m or inch ခြား line တွေတင်ချင်ပါတယ်။
အဖြောင့်အကွာအဝေး မဟုတ်ပါဘူး။ Curve ပေါ်မှာ အညီအမျှရှိရပါမယ်။ ( ဥပမာ center တစ်ခုကနေ ပိုင်းမှာပါ။ array နဲ့ဆိုရင် ပထမ အပိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းက မညီလို့ပါ။ ကျွန်တော်လိုချင်တာက စထွက်ကနေ စပိုင်းတာကိုလိုချင်တာပါ။ )
Curve ရဲ့ စမှတ်ကနေပြီး 3m စီခြားမှာပါ။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ အပိုင်း( ပိုတဲ့ အပိုင်းက ဘယ်လောက်ရှိရှိ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး )
စထွက်ကနေ 3m ပုံမှန် အညီအမျှ ရှိရင်ရပါပြီ။
ပုံမှန် divide common နဲ့ဆိုရင် မျဥ်းဖြောင့်ပေါ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်တယ် လို့ထင်လို့ပါ။
အကွေးပေါ်မှာလည်း divide နဲ့ ပိုင်းလို့ရပါတယ်...အဓိကက ပိုင်းမယ့် object ကို block လုပ်ပြီး နာမည်ပေးခဲ့ဖို့ပဲ..block လုပ်တဲ့ အခါမှာလဲ pick point ကို block ရဲ့ 
centre ကို ကောက်ခဲ့မှ အဲဒီ အမှတ်ကို curve မှာ point အနေနဲ့ ယူပြီးပိုင်းပေးပါတယ်..
Enter name of block to insert: 1
Align block with object? [Yes/No] &lt;Y&gt;:
Enter the number of segments: 12
အခု အထက်က ဟာက ကျွန်တော် block နာမည် 1 လို့ပေးပြီး လုပ်ထားတဲ့ command procedure ပါ.. :)
သူက ပစ္စည်း အရေအတွက်နဲ့ ပဲ ပိုင်းလို့ရတာပါ.. :P
ဟား... :angry:ကျွန်တော်က အတိုင်းအတာနဲ့ ပိုင်းချင်တာဗျဆိုပြီး စိတ်မပူပါနဲ့. ;D
Specify length of segment: as you like :)
CATIA V5 file import plug-in for AutoCAD ...အလကားရမယ့်နေရာလေးတွေ..ရှိရင်မစကြပါ....ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး :&#039;(
CATIA V5 ဆိုတာကို ကျွန်တ်ာမသိဘူးခင်ဗျ ..တစ်ခြားသိတဲ့သူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်....
ရှင်းပြပါဦး...အဆင်ပြေရင်...ဒါဆို တစ်ချို့ သိပေမယ့် အခေါ်အဝေါ်လွဲနေတဲ့ သူတွေ သိပြီး ကူညီပေးနိုင်မှာပါ :)
ပြီးတော့ ဒီလို အခက်အခဲလေးတွေ အတွက်
&quot;အခက်အခဲတွေ ရှိ၇င် ဒီကိုလာပါ&quot; ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖွင့်ထားပေးပါတယ် အဲဒီထဲမှာ တောင်းဆိုပေးပါနော်...
phyu saw thein
ကျနော် learning အော်တိုကဒ် ၂၀၀၄ ကို window XP နဲ့ တုန်းက ဖွင့်လို့ ရပေးမယ့် အခု window7နဲ့ ကျတော့ ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဗျာ :?.... ဘယ်လို့ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ကျနော် အကို အမများ ကူညီပေးကြပါဦး .........ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
Learning အော်တိုကဒ် ၂၀၀၄ ဆိုတာ tutorial တွေ movies နဲ့ သင်တာပြောတာလား...software ကိုပြောတာလား ..software ဆိုရင် autocad နဲ့ autocad LT ရယ်လို့ပဲသိတယ်ဗျ.. :)
movies နဲ့ သင်တာပြောတာ ဆိုရင်တော့ player နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ဗျ..software ဆိုရင်တော့ ကို MZ ပြောသလို စမ်းကြည့်ပါ..မရရင်လဲ အကြောင်းပြန်ပါဦး.. နော်:)
အကို တို့ရေ ကျွန်တော်အခက်အခဲ တစ်ခုရှိလို့ပါ။autocad ထဲက data တွေကို excel ထဲကိုပို့ချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပို့ရမလဲသိချင်ပါတယ်။ဥပမာ rectangle (or) polygon တခုရဲ့ corner point တွေရဲ့coordinate point တွေကို excel ထဲပို့ချင်တာပါ။ကူညီကြပါဦး။point တွေ ရာနဲချီပြီးရှိနေလို့ပါ။အားကိုးလျက်
ဟုတ်တယ် ကိုပါကြီး....အော်တိုကဒ် ၂၀၀၄ tutorial အတွက် Movie နဲ့ တင်ထားတာပါ...ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတာ ...သူက ပြောထားတာတော့ flash player ကို install လုပ်ရမယ်တဲ့ ...install လုပ်မယ်ဆို ဘယ်လိုတွေ သွားရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး MZ နဲ့ ကိုပါကြီးခဗျာ.......flash player ကို install လုပ်လို့ မယ့် လင့်ခ်လေးနဲ့အတူ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်လေးတွေပါ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်...ဗျာ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အကို တို့ရေ ကျွန်တော်အခက်အခဲ တစ်ခုရှိလို့ပါ။autocad ထဲက data တွေကို excel ထဲကိုပို့ချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပို့ရမလဲသိချင်ပါတယ်။ဥပမာ rectangle (or) polygon တခုရဲ့ corner point တွေရဲ့coordinate point တွေကို excel ထဲပို့ချင်တာပါ။ကူညီကြပါဦး။point တွေ ရာနဲချီပြီးရှိနေလို့ပါ။အားကိုးလျက်
If your objects are blocks you can easily get it with data-extract; but if those are not blocks (just polyline), you may only get the property &quot;area, width, length&quot; only.
pls refer to Ko pargyi &amp; my posts here
ဟုတ်တယ် ကိုပါကြီး....အော်တိုကဒ် ၂၀၀၄ tutorial အတွက် Movie နဲ့ တင်ထားတာပါ...ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတာ ...သူက ပြောထားတာတော့ flash player ကို install လုပ်ရမယ်တဲ့ ...install လုပ်မယ်ဆို ဘယ်လိုတွေ သွားရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး MZ နဲ့ ကိုပါကြီးခဗျာ.......flash player ကို install လုပ်လို့ မယ့် လင့်ခ်လေးနဲ့အတူ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်လေးတွေပါ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်...ဗျာ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
ကူညီကြပါဦး Fri တို့ ကျွန်တော် adobe premiere 1.5 နဲ့ edit လုပ်ပါတယ် ခွေကောင်းကောင်းထုတ်ချင်လို့ conopus Pro coder v2.0 သွင်းပါတယ်။ install လုပ်ပြီ တော့ reset ကျခိုင်းပါတယ် ပြန်တက်လာတော့ procoder ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ် error တက်လာတယ်
Pro coder2USB key not found (-3) လို့ပြောပါတယ် အဲဒါဘယ်လိုများဖြေရှင်းလို့ရမလဲ မသိဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီ ဖြေ၇ှင်းပေးကြပါ။
သင်တန်းက စက်ကြရပါတယ်။အိမ်မှာပြန်သုံးတော့ အဲလိုဖြစ်နေတာပါ ........... :&#039;(
ခွေကောင်းကောင်းထုတ်ချင်လို့ conopus Pro coder v2.0 သွင်းပါတယ်။
အခက်အခဲမေးတာ နေရာမှားနေတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ thread က autocad နဲ့ ဆိုင်သောအခက်အခဲများပါ။
ကြည့် ရတာ hardware lock key တောင်းနေပုံရပါတယ်။ သင်တန်းကစက်မှာ usb key ထိုးထားလို့ သော်၎င်း၊ hardware lock ကို ကျော်ထားလို့ သော်၎င်းကြောင့် ရနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ lock ကိုကျော်နိုင်တဲ့ခရက် ရှာကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် lock ကျော်ပြီးသား ရီပက်ခ် (သို့ ) ခရက် ရှာပြီး install လုပ်ကြည့်ပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
အခုမှတွေ့ လို့ အကြံပေးတာနောက်ကျတာခွင့် လွှတ်ပါ။
အသုံးကျမကျတော့ မသိပါ၊ ကျနော် နေ့ စဉ်သုံးနေတဲ့point တခုက x,y,z coordinate များထုတ်ပေးနိုင်တဲ့plist ဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ .lsp ကို တင်လို့ မရလို့.txt နံမည်နဲ့ တင်ထားပါတယ်။ download လုပ်ပြီး plist.lsp လို့ extension ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ။ ကျနော့ အမြင်မှာတော့layer အသစ်တခုဖွင့် ပြီး အဲဒီ layer မှာ rectangle (or) polygon တခုရဲ့ corner တွေ မှာ point လိုက်ထဲ့ ပါ။ ပြီး ရင် plist ကို ခေၞလိုက်ပြီး အဲဒီ point အားလုံးကို select လုပ်လိုက်ပါ။
ကျနော်မှာ အဆင်မပြေတာလေးတစ်ခုဗျ... ကူညီပေးပါဦး အကို အမ တို့
အော်တိုကဒ် ၂၀၀၅ ကို သက်တမ်း ကုန်သွားရင် ပြန်ပြန်လုပ်နေ၇တာ... အခုဆို ၂ခါရှိပီး ...အခုတခါ လုပ်တော့ လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်... အကိုတို့ အမတို့ဆီမှာ သက်တမ်းကုန်လို့ ပြန်ပြန်ပြီး reg မလုပ်ဘဲ တခါတည်း သုံးလို့ ရမယ့် အော်တိုကဒ်၂၀၀၅ ဆော့ဝဲလ် ရှိရင် မျှဝေပေါဦး ဗျာ...၂၀၀၄/၂၀၀၅ နှစ်ခုထဲက အကို အမတို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဟာလေး မျှဝေပေးပါဦး ....ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
ခရက် file သုံးမှ ရမှာပါ။..ကျွန်တော့်ဆီတော့ ၂၀၀၈ နဲ့ အထက်ပဲရှိတယ်ဗျ....၂၀၀၅..၂၀၀၄ တော့မှရှိဘူး
ရှိတဲ့သူတွေ တင်ပေးပါလိမ့်မယ် ခဏစောင့် ပေးပါနော် ။နောက်တစ်ခုမေးချင်တာက ရန်ကုန်မှာလား မန်းလေးမှာလားဗျ...
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ cd ဆိုင် သွားဝယ်ပြီး ခရက် ဖြည်လိုက်ရင် ပိုမြန်မယ်ဗျ..တစ်ချပ်မှ 500 လောက်ပဲရှိတာ...အရေးကြီးလို့မစောင့်နိုင်
အဲဒီမြိူ့တွေမှာ နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အထက်မှာ ပြောသလို ပြေးဝယ်လိုက်ပါ :)
ကျွန်တော် စီရီရယ် ကီးတွေ တင်ပေးထားပါတယ် ..
တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့ ..ဒါမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ရှာပေးပါမယ် ဘယ်ဒေါင်းလုဒ်လင့်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးပါ ပေးခဲ့ ပေးပါ ..
ခုတော့ ဒီစီရီရယ် ကီးတွေနဲ့စမ်းကြည့်ပါအုန်း ..
[quote author=ငမောင် link=topic=546.msg54032#msg54032 date=1275390818]
အဲဒီ layout က background ကြီးကော စာရွက်ကြီးကောပြန်ဖြူသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Options &gt;Display&gt;Display printable area နဲ့Display paper background မှာ Check လုပ် ပေးလိုက်ရင် layout က background ကြီးကော စာရွက်ကြီးကောပြန်မြင်ရတယ်...
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်က မလေးရှားမှာပါ ..အရင်က သုံးရတော့ ဆိုင်မှာ ရောက်ပေမယ့် မဝယ်ဖြစ်ဘူး CD ကို အခုတော့ ဝယ်ရမယ်...နောက်ထပ် အကို အမတွေ တင်ပေးတာကိုလဲ မျှော်လင့်နေပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို
ကီးဂျန်း for autocade 2005
Use the စီရီရယ် in Code.txt (400-12345678)
First time you run AutoCad the choose &quot;Activate the product&quot;
Copy the Reguest code to ကီးဂျန်း.exe
Choose &quot;Enter activation code (have an activation code)&quot;
Choose country (works with Danmark)
Copy the Activation Code from ကီးဂျန်း.exe
ကျနော် အခက်ခဲကို အကိုတို့ ကူညီပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဗျ... အခုတော့ ကိုပါကြီး ပေးတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆော့ဝဲလ်ခွေဝယ်ပီး တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ် ဗျာ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုတို့ ရေ...
စနိးလည်း အကုအညီ တောင်းစ၇ာ၇ှီမှ ဒီထဲဝင်ေ၇းသလိုတော့ဖြစ်နေပါပြိ။ တစ်ခုလောက်၇ှင်းပြပေးပါဥိး်။
new toolbar တစ်ခုတောင်းပြိး အသုံးပြုချင်တဲ့ command တွေကို drag လုပ်ပြိး ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။
command တွေတော့toolbar ထဲေ၇ာက်သွားပေမယ့် အဲဒိမှာ icon ပုံလေးတွေမပေါ်ပဲ toolbar က အဖြူေ၇ာင်ပြိးပဲဖြစ်နေပါတယ်။
pls see this file,may be u can do.
toolbar က kay lay ပြောသလိုမျိုးလုပ်ထားတာပါပဲ ။ဒါပေမယ့် ဒိလိုပုံစံမျိုးပဲပေါ်နေလို့ပါ။ test1.pdf ပါ။
New tool bar မသုံးဘဲ tool palettes ကို သုံးကြည့်ပါလား... ကျနော်လည်း ဟိုးအရင်က အဲဒီလို customised tool bar လေးတွေ လုပ်ပြီး ကိုယ်သုံးနေကြ command လေးတွေ ထည့်ထားတယ်.. နောက် ကျနော် ရဲ့ modified လုပ်ထားတဲ့ macro command လေးတွေကို ကိုယ်ပိုင် image လေးတွေ ရေးပြီး command နဲ့ associate လုပ်ပေးထားတယ်... အဲဒီမှာ ပြသနာက စက်က ဘယ် file path အတိုင်း ပေးပြီး အော်တို သိမ်းသွားမှန်း မသိဘူး... စက် အသစ်ပြောင်းတာတိှု့ဗားရှင်း အသစ်ပြောင်းတာတို့ ဆိုရင် ဒုက္ခရောက်ရော...
tool palettes ကြတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတာကို back up အနေနဲ့ export / import လုပ်လို့ရတယ်.. အဲဒီမှာ image file တွေ တစုတဝေးထဲ သိမ်းသွားတာ ဆိုတော့ လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် tool palettes လေး ခေါ်ပြီး import လုပ်လိုက်ရုံဘဲ...
new tool palettes create လုပ်တာ ကလည်း new tool bar လုပ်သလို ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ... (မသိဘူးဆိုရင် ပြောပြပေးပါမယ်..) ပုံမှာ မြင်တဲ့ အတိုင်းဘဲ ကျနော် ထည့်ချင်တာ အကုန် ပစ်ထည့်ထားလိုက်တာဘဲ...
AutoCAD 2008 မှာ သုံးနေရင်းနဲ့ Error တက်လာလို့။ ပထမသုံးနေတုန်းကအကောင်း။ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတော့ Open and save dialog box ကျမလာ တော့ဘူး။ ဒါနှဲ့Script File နဲ့ Deafult File Run ကြည့်တာ လည်း Dialogs Box ကျမလာတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ Uniinnstal လုပ်၊ ပြီးတော့ Reinstall လုပ်ကြည့်တော့လည်း ဒီအတိုင်းဘဲဆက်ဖြစ်နေတယ်။ Option ထဲ့ဝင်ကြည့်တော့ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ Option > System tab အောက်က Show startup dialog ဆိုတဲ့ဟာ မပေါ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ command မှာ startup ရဲ့ System Varaible ကို 1 ပေးကြည့်တော့လည်း ထူးမခြားနားဘဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီကြပါဦး။
တဆက်တစပ်တည်း Script File နဲ့ Default Run တာလေးလည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ AutoCAD သုံးနေရင်းနဲ့ Error တက်လာခဲ့မယ် အားလုံး Default ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စက်ကို ကလိသွားတာဘဲဖြစ်ဖြစ် မှားပြီးလုပ်မိတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ C:\_Program Files\_AutoCAD 2007\_Express အောက်က Default.scr ဆိုတဲ့ File လေးကိုတော့ သိမ်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Command Line မှာ scr ဆိုပြီးရိုက်ထည့် Dialogs Box ကျလာရင် open ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင် oK............
ညီလေးရေ အကို ကလိတာလွန်သွားလို့ လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
Command: -toolbar Enter toolbar name or [ALL]:
Command: -TOOLBAR Enter toolbar name or [ALL]: all
Enter an option [Show/Hide]: s
ဆိုမှဘဲ ရတော့တယ်။ ToolBar တွေကတော့ အကုန်ပေါ်လာတာပေါ့။ ပြီးမှ ကိုလိုချင်တဲ့ Toolbar ကိုရွေးယူလိုက်ရတယ်။
ကိုယ်ပိုင် hatch patter တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါအုံးနော်
hattch pattern လေးတွေ share ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆီက hattch တွေရထားလို့ပါ
ကို save ထားတဲ့ folder ထဲမှာရှိနေတဲ့ drawing file တွေမှာတော့ custom hattch pattern ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်
ဒါပေမယ့်တခြား folder က drawing မှာဆိုမရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်
drawing အားလုံးမှာပေါ်အောင်ဘယ်နေရာမှာ save ရမလဲ
တခြား ကိုယ်ပိုင် hattch pattern တွေကိုရောဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်ဆိုတာလေးတွေသိရင်ကူညီကြပါအုံးနော်
senior ကိုကို၊မမ နဲ့ friend တို့ရေ
Custom Hatch pattern တွေကို အမြဲတမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Hatch Pattern တွေလုပ်ထားတဲ့ဖိုဒါလေးကို Support File ထဲကို ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတာ Windows OS ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ AutoCAD ကိုဖွင့်လိုက်၊ ပြီးရင် Right Click နှိပ်ပြီး Option ကိုဝင်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ File tab ကိုဖွင့်ပါ။
Support File Search Path ဆိုတာမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ Support File တွေရှိတဲ့နေရာကိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ Windows XP မှာဆိုရင် C:\_ Documents and Setting\_ user\_ Application Data\_ Autodesk\_ AutoCAD 2007\_ R12\_ enu\_ support ပါ။
အနီရောင်တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်တွေက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ support ဖိုဒါအောက်မှာထည့်ကြည့်လိုက်ရင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တနည်းက ကိုယ်ရဲ့ဖိုဒါရှိတဲ့နေရာကို ပြန်ညွှန်းပေးရင်လည်းရပါတယ်။ ခုဏကပြောတဲ့ Option Dialouge Box မှာပဲ Support File Serch Path ကို Select အရင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ညာဖက်မှာရှိတဲ့ Add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Browse ဆိုတာလေးကိုနှိ်ပ်လိုက်ရင်ဖိုဒါရွေးပေးရမဲ့ Dialouge Box တစ်ခုကျလာပါမယ်။ အဲဒီမှာကိုယ့်ဖိုင်သိမ်းထားတဲ့ဖိုဒါကိုရွေးပေးပါ။
Pattern ရေးတဲ့အပိုင်းကတော့ အသုံးမချတာကြာတဲ့အတွက်မေ့နေပါပြီ။ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ AutoCAD န၏မှာပါတဲ့ Pattern ရေးပုံရေးနည်းကိုပဲအရင်လေ့လာကြည့်ပါဦး။အောက်မှာ နမူနာအနေနဲ့ AutoCAD ရဲ့ Default Hatch Pattern တချို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625
90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625
auto cad မှာတခါတလေ point ယူလို့မရဘဲဖြစ်နေတာဘာလို့လဲ
snap point လဲခေါ်ထားတယ်နော်ဒါပေမယ့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ဒီကောင်လေး (http://myanmarengineer.org/forums/showthread.php?204-Auto-CAD-Tips-amp-Tricks/page15) နဲ့ များ ဆက်စပ်နေမလားမသိ။
နောက် တခါတလေ ဖိုင်က ကြောင်နေရင် ဖိုင်အသစ်ခေါ်ပြီး insert နဲ့ တင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် နောက် ဖိုင်လေးနေတာလဲ တော်အသင့် လျှော့သွားနိုင်ပါတယ် စမ်းကြည့်ပါအုန်း။
အဲဒါမှ အဆင်မပြေသေးရင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ အသေးစိပ်လေး မေးကြည့်ပါ့လား သိတဲ့ ကိုကို မမတွေတို့ ကျနော်တို့ ခေါင်းကူစားပေးပါ့မယ်။
Express ထဲက Break Line Symbol နဲဆွဲတာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ
you will need to define "Size" and "Extension". Sample pic showsabreak line on 9" wall.
file တခုကတခုကို copy /paste လုပ်တာမပေါ်လို့ပါ
မူရင်း file က object ကို explode လုပ်ပြီး paste လုပ်မှရတယ်
တခုခု error ရှိနေလို့များလားမသိဘူးနော်
mm file မှာ mline scale ကိုဘယ်လိုချိန်ရလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးကြပါအုံးနော်:redface:
မ၀ါေ၇ စနိုးကတော့flie တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကော်ပီကုးမယ်ဆို၇င် file 2ခုကို menu bar မှာပါတဲ့cascade ကိုအ၇င်နှိပ်ပြိး
tile verically ဖြင့် ၂ခု ယှဉ်ဖွင့်ပြိးတော့ မှကူးချင်တဲ့ file ကို copy withe base point နဲ့ကူးပြိး တစ်ဖက်မှာ paste လုပ်လိုက်တာပဲ။
paste ဆိုတဲ့ စာလုံးပေါ်မလာ၇င်လည်း ctl+vကိုနှိပ်ပြိးတော့လည်း paste လုပ်လို့၇ပါတယ်။
မ၀ါရေ ကျနော့် သိသလောက် ဖြစ်တတ်တာလေးတွေး ပြောကြည့်မယ်နော့် (ဆန်အိုးတိုးကောင်းတိုးနိုင်တာပေါ့နော့်):redface::redface:
အမခေါ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ ယူနစ် တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါ။
နောက် အမခေါ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ရဲ့ အပြင်လေယာက ဒီဖက် ပေ့စ်ချမယ့် ပုံမှာ Freeze/off လုပ်ထားလား တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါ။
အဲနောက်ဆုံး(ကျနော်သိ သလောက်ပေါ့နော်) ကတော့ အမခေါ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့နာမည်က ဒီဖက်မှာ ရှိနေပြီးသား တခြား ဘလော့ ရှိနေတယ်ဆိုရင်လဲ ကြောင်တတ်ပါတယ်။
အလွယ်ကူဆုံး စမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ကော်ပီကူး ပုံအသစ်ခေါ်ပြီး တင်ကြည့်ပါ ပုံအသစ်မှာမှ ရတယ်ဆိုရင် အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ တစ်ချက်ချက် ညိနေလို့ပါ။
အဲ စနိုး ပြောသလို copy with base point ယူပြီး ဒီဖက်မှာ ပြန်ချချင်ရင်လဲ ရပါ၏။ နောက် စနိုးပြောသလို tile viewport လုပ်နေတာထက် ပုံတစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံ ခုံချင်ရင် Ctrl+tab ကီးကို အားပေးပါ ဖွင့်ထားသလောက် ပုံတွေကို ခုံသွားပါလိမ့်မယ်။
နောက် menubar က window အောက်မှာလဲ ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပေါ်ပါတယ် အဲဒီမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံကို ကလစ်လိုက်ယုံပါပဲ။
အဆင်ပြေပါစေဗျာ မပြေလဲ ပြန်ပြောပေါ့နော့ သိတဲ့ကိုကိုတွေ ၀င်ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကျနော် ကူညီပါအုံး
ကလိတာလွန်သွားလို့ Custer ကကြီးသွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
Cursor size ကြီးသွားတာကို ပြောတာလားမသိဘူးနော်။
cross hair ကြီးသွားတာဆိုရင် cursorsize ဆိုပြီးတော့ Enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီမှာ ကိုယ်ထားချင်တဲ့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။5ဆိုရင်သင့်တော်ပါတယ်။
cursor ရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ စတုရန်းပုံလေး ကြီးတာဆိုရင်တော့ pickbox ဆိုပြီးတော့ Enter ခေါက်ပါ။ ဒီကောင်ကလည်း5ဆိုရင် အနေတော်လောက်ပါပဲ။
autocad file ကို Lock ချနည်းလေးများသိရင် share ပေးကြပါအုံးနော်
အားလုံးသောဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသော member ၀င်များအုံးလုံးကို :)
Option>open and Save>ဘယ်ဘက် အောက်နားမှာ security Options ဆိုတာလေးရှိပါ၏
အဲဒီမှာ password ထည့်ပြီးအားပေးလိုက်ပါနော်
စကားဝှက်ကို မမေ့အောင်တော့ ဂရုစိုက်စေချင်ပါ၏ မေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျနော်လဲ မသိသေးပါ
ညီမတွေ့ဘူးတဲ့ file တခုကဆိုရင် သူ့ရဲ့ file ထဲမှာဘာ command မှထပ်ရိုက်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာ
AutoCAD မှာ built in ပါတဲ့ facility ထဲမှာတော့ ကိုလိပ်ကြီး ပြောပြပေးတဲ့ password security မျိုးဘဲ တွေ့ဘူးပါတယ်..
တခြား option အနေနဲ့ ကတော့ windows က ပါတဲ့ security option ကို သုံးနိုင်ပါတယ်.. password လဲ ပေးစရာမလိုပါဘူး... ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့ file ကို right click နှိပ်ပြီး > properties > security > အောက်ကနေ "edit permission type" မှာ တခြား user ကို read, write, modify ကြိုက်တဲ့ level ပေးသုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်..
သူကတော့ ကိုယ် ပေးလိုက်တဲ့ file ကို ပြင်လို့ မရဘူး ဆိုတာမျိုးဘဲ ရနိုင်ပါတယ်.. ကျနော်လုပ်ဖူးတဲ့ ကုမ်ပဏီတွေမှာတော့ pdf ကို hard copy သဘောမျိုး issue လုပ်ပါတယ်.. dwg file ကိုလည်း ရိုးရိုးဘဲ ပေးပြီး issue လုပ်ပါတယ်....ီဒီမှာက copyright ကလည်း အားကောင်းတော့ ချွတ်စွတ်ခိုးလာရင် တရားစွဲဖို့ ဘဲ ရှိပါတယ်.. client နဲ့ responsibility ပိုင်း တခုခု ရှိလာရင် ရှင်းနိုင်အောင် hard copy အနေနဲ့ pdf ထုတ်ပေးထားတာပါ..
command ကိုပါ ပိတ်ထားချင်တယ် ဆိုတာက copy & paste လုပ်လို့ မရအောင် ကာကွယ် ချင်တဲ့ သဘော ပိုများမယ် ထင်တယ်.. အဲဒါမျိုး ဆိုရင်တော့ CADLock CAD vault စတဲ့ third party software မျိုး ထပ်သုံးရမယ် ထင်ပါတယ်.. ဒီမှာ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေ ကြည့်လို့ရပါတယ်..
super hatch ချယ်တာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါအုံးနော်
senior ko/ma ma များရှင်
This is from Sayar U Robert 's book.
pls change SUPERH.txt to SUPERH.dwg.
ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာမှာ Windows Script Host ဆိုပြီးတော့ အောက်မှာ ကြက်ခြေခတ်အနီနဲ Can not find script file "C:\_WINDOWS|system32|killVBS.vbs". ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဗျာ. ok ကလစ်လုက်တော့ပြောက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ desk top ပေါ်မှာဘက်ကဒေါင်ကလွဲလိုဘာမှမပေါ်ပါဘူးဗျာ.... save mode ထဲကိုလဲ ၀င်လိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ... ကျွန်တော် စတက်လေလဲထိုးလိုက်မိတာ စတစ်ထဲက ဖိုးတာတွေအကုန်လုံး .exe တွေနဲဖြစ်ကုန်ပါတယ်....ကယ်ကျပါအုန်ဆရာတို့ရယ်.........:waa :Waa
ဒီနေရာက autocad နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေ အတွက် မေးဖို့ပါ ခင်ဗျ..
ဒီနေရာလေးမှာ (http://myanmarengineer.org/forums/forumdisplay.php?157-windows-%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8) အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ
Version အမြင့်နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ Dwg တွေကို Version အနိမ့်နဲ့ ဖွင်ချင်လို့ Version ပြောင်းဖွင့်လို့ရတဲ့ Software လေးများရှိရင် ကူညီးပြီးတင်ပေးစေလိုပါတယ်
အဲဒီမှာ သွားပြီးတော့ Form ဖြည့်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါ။
DWG TrueView ကို သုံးပြီး တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရသလို လိုချင်တဲ့ Version လည်း ပြန်ပြောင်းလို့ ရပါတယ်.. Autodesk ကဘဲ Free ပေးတဲ့ Software ပါ.. ဒီမှာ download လုပ် လိုက်ပါ.. Form လေး တခု ဘဲ ဖြည့်ဖို့ လိုပါတယ်.
Download "DWG True View" (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112)
ိDrawing ရဲ့ company logo JPEG နေရာတွေမှာ ပတ်လမ်းကြောင်းပဲ ပေါ်နေလို့ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ သိချင်လို့ ကူညီပေးပါအုံး။
ကျနော်စက်မှာ AUTOCAD 2011 LT တင်ထားပါတယ်။ auto save file ကိုဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမလဲမသိလို့ ပြောပြကြပါအုန်း။
auto save option ကို on ထားပါတယ်။ မနေ့က ပုံတခုဆွဲနေရင်း power breaker ကျသွားလို့ စက်ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ C:\_Users\_Aung\_appdata\_Local\_Temp မှာ sv$ file ရှိနေပါတယ်။
file name က Drawing1-1_1_1_7936 ဆိုပြီးပြနေပါတယ်။ Drawing Recovery Manager မှာတော့ No backup information လို့ပေါ်နေတယ်
help ကိုဝင်ကြည့်တော့ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းခိုင်းလို့ပြောင်းကြည့်ပေမယ့်ဖွင့်လို့မရဘူး..
# Filename is the current drawing name.
#ais the number of open instances of the same drawing file in the same work session.
#bis the number of open instances of the same drawing in different work sessions.
# nnnn isarandom number.
1. In Windows Explorer, locate the backup file identified by the .bak file extension.
2. Select the file you want to rename. You do not need to open it.
3. Click File menu Rename
4. Enteranew name using the .dwg file extension.
5. Open the file as you would open any other drawing file.
ဖိုင်နာမည်မှာ .dwg ထည့်ကြည့်တာဘာမှမထူးခြားလာလို့ အဲဒီပုံကိုဘယ်လိုပြန်ရနှိုင်မလဲ ပြောပြကြပါအုန်း...
.dwg ရဲ့ file extension ကို အရင်ဆုံးပြအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒါက folder option ကနေဝင်ရတာလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ file type ဆိုတဲ့ tab မှာ extension ထဲက dwg ကို ရှာပြီးတော့ပြင်ရမှာပါ။
အဲဒါပြီးမှ sv$ extension ကို dwg အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရမှာပါ။
"Drawing1-1_1_1_7936.sv$" ဖိုင် ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး "rename" ခေါ်လိုက်ပါ။
ဖိုင်နံမည်ပေါ် highlight ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင် ဖိုင် extension ".sv$" ကို ".dwg" ပြောင်းလိုက်ပါ၊ "Drawing1-1_1_1_7936.dwg" ဖြစ်သွားပါမယ်။
Autocad နဲ့ ပြန်ဖွင့်လို့ ရပါပြီ။
်file name မှာပေါ်နေတာက .sv$ မပါဘဲ Drawing1-1_1_1_7936 သက်သက်ဘဲပြနေပါတယ်။ အဲဒါကိုrename ခေါ်ပြီး .dwg ထည့်ကြည့်လိုက်တော့
Drawing1-1_1_1_7936.dwg လို့ဖြစ်သွားပေမယ့် file type က sv$ လို့ဆက်ပြနေတုန်းဘဲ ဖွင့်လို့မရသေးဘူး။ ကူညီပါအုန်းနော်..